YEYINTNGE(CANADA): Monday, December 29
Moe Myint Thein
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 12/29/20140အကြံပြုခြင်း
၀မ်ပေါင်ခတ်သည့်ခြံစည်းရိုးအားဖျက်သဖြင့် ရဲက သေနတ်ဖြင့်ပြန်လည်ပစ်ခတ်
ရန်ကုန်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၉
ယနေ့နေ့လည် ၂ နာရီ ၁၅ အချိန်တွင် လက်ပတောင်းတောင်ကြေးနီစီမံကိန်း အနီးရှိ ဒေသခံများက ၄င်းတို့၏ မြေယာများအားသိမ်းဆည်း၍ ခြံစည်းရိုးခတ်သွားသော ၀မ်ပေါင်ကုမ္ဗဏီ၏ သံဆူးကြိုးခြံစည်းရိုးများအား ပြန်လည်ဆွဲခွာနေသည်ကို တားဆီးသည့်အနေဖြင့် ရဲတပ်ဖွဲ.က သေနတ် နှစ်ချက်ပစ်ဖောက်ခဲ့သည်။
ရွာသားများက စီမံကိန်းလုပ်ဆောင်နေသော တရုတ်နိုင်ငံပိုင် ၀မ်ပေါင်ကုမ္ဗဏီ မြန်မာနိုင်ငံမှထွက်ခွာရေး၊ ကြေးနီစီမံကိန်းဖျက်သိမ်းရေးတို့ကို ဆန္ဒပြတောင်းဆိုနေပြီး ဆည်တဲရွာမြောက်ပိုင်းရှိ ကုမ္ဗဏီမှလွန်ခဲ့သည်အပတ်က စီမံကိန်းတိုးချဲ.ရန်ခတ်သွားသည့် ခြံစည်းရိုးအချို.အား ဖျက်ပစ်ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြောင်း အခင်းဖြစ်ပွားရာတွင် ရောက်ရှိနေသည့် ဇီးတောကျေးရွာ စမ်းမြ၀တီဘုန်ကြီးကျောင်းမှ ကျောင်းထိုင် ဆရာတော်ဦးအာလောက က ပြောကြားသည်။
လောက်လေးခွများ၊ ဆန္ဒပြပိုစတာများ ကိုင်ဆောင်ထားသော ဆန္ဒပြသမားများ က သံဆူးကြိုးခြံစည်းရိုးများအနားမှ ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့သောလည်း ဆက်လက်ဆန္ဒပြနေကြောင်း၊ သေနတ်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် တစ်စုံတစ်ဦးမှ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုမရှိကြောင်း ၄င်းက ပြောကြားသည်။
ကြေးနီစီမံကိန်း လုပ်ကိုင်နေသော မြန်မာစစ်တပ်ပိုင် ဦးပိုင်ကုမ္ဗဏီနှင့် တရုတ်နိုင်ငံပိုင် ၀မ်ပေါင်ကုမ္မဏီအား ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမှုများကို စီမံကိန်းအနီးရှိ လွန်ခဲ့သည့်အပတ်က ရဲတပ်ဖွဲ.များ၏ ပစ်ခတ်မှုကြောင့်သေဆုံးခဲ့သော မိုးကြိုးပြင်အလယ်ရွာမှ ဒေါ်ခင်ဝင်း သေဆုံးခဲ့သည်နေရာ၊ တုံရွာအနောက်ဘက်နှင့် ဆည်တဲရွာမြောက်ဘက်တွင် ဆန္ဒပြတောင်းဆိုနေကြခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖြစ်သည်။
"ကိုမြေပေါ်မှာမတရားခြံလာခတ်တာလက်မခံဘူး အဲဒီအတွက် ခြံစည်းရိုးတွေကို့ ကျနော်တို.ရွာသားတွေက နုတ်ပစ် တာကို ရဲတွေက လူအုပ်ကြားထဲကိုသေနတ်နဲပစ်ပြီး တားတယ် ကျနော်တို့ကဆက်လက် တောင်းဆိုမှာပဲ" ဟုဆန္ဒပြသူတစ်ဦးဖြစ်သည့် ကိုထက်က ပြောကြားသည်။
ဆည်တဲရွာမြောက်ဘက်ပိုင်းတွင် ၀မ်ပေါင်ကုမ္မဏီမှ ကာရံထားသော ခြံစည်းရိုးများကို ဖြိုဖျက်ပြီး ဒေသခံ တောင်သူများအနေဖြင့် အထိုင်သပိတ်စခန်းစတစ်ခုဖွင်လှစ်ပြီး မိမိမြေ ပြန်လည်မပေးမခြင်း ဆန္ဒပြတောင်း ဆိုသွားမည်ဖြစ်ပြီး လက်ရှိအခြေနေတွင် တုံရွာမှဒေသခံတောင်သူများနှင့် ဆည်တဲရွာဒေသခံတောင်းသူများ စုပေါင်းပြီးအင်အား၄၀၀ ၀န်းကျင်ဖြင်တောင်းဆိုနေကြသည်ဟု လည်းသိရှိရသည်။
“အခုဒီနေရာမှာကျွန်တော်တိုရွာသားတွေ ကိုမြေကိုပြန်မရမချင်း စခန်းဖွင်ပြီးတောင်းဆိုဖိုလုပ်နေပါတယ် သူတိုသေနတ်နဲ့ပစ်ချင်လည်းအသေခံမယ်။်မြေပြန်မရရင်ဒီနေရာကမထတော့ဘူး” ဟု၎င်းကပြောကြားသည်။
စစ်တပ်ပိုင် မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်လီမိတက်နှင့်ဝမ်ပေါင် ကုမ္ဗဏီတို. ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်နေသော လက်ပတောင်းကြေးနီစီမံကိန်းအားတို.ချဲ.ရာ မြေ ၁ ဧက ၁၈ သိန်းဆိုသည့် လျော်ကြေးနှုန်းကိုလက်မခံနိုင်သော ရွာသားများ၊ မြေလျော်ကြေးကိုလုံးဝလက်မခံဘဲ မိရိုးဖလာတောင်သူအလုပ်ကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်လိုသော ဒေသခံများနှင့် ပဋိပက္ခဖြစ်နေခြင်းဖြစ်သည်။
ပဋိပက္ခအားဖြေရှင်းရာတွင ဒေသပိုင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသပိုင်အာဏာပိုင်များက တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းမှုများမရှိကြောင်း၊ စီမံကိန်းလုပ်ကိုင်နေသည့် ၀မ်ပေါင်ကုမ္မဏီသည်လည်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သည့်နေရာတွင် ဒေသခံတောင်သူတွေကို အလေးမထားတာတွေရှိကြောင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ.ချုပ်ပါတီမှ ဒေါ်ခင်စန်းလှိုင်က ဆိုသည်။
“တကယ်ခံစား နေရတဲ့တောင်သူတွေဘ၀ကိုနာလည်မပေးဘူး သူတိုဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းပြုလုပ်တော့ ဒီပြသနာတွေက မကြီးထွားသင်ဘဲကြီးထွားလာတာ။ ဒီကိစ္စမှာတာဝန်ရှိတာ အစိုးရနဲ့ကုမ္မဏီကတာဝန်ရှိဆုံးဘဲ။ညှိုနှိုင်းမှုမလုပ် ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းဆက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ အရင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြသနာထက်ပိုကြီးဖိုဘဲရှိတယ်” လို့ ၄င်းကဆိုသည်။
လွန်ခဲ့သည့်ရက်သတ္တပတ်ကဖြစ်ခဲ့သော ပဋိပက္ခတွင် ဒေသခံတစ်ဦးသေဆုံးကာ လူပေါင်း ၁၀ ဦးထက်မနည်း ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ ထိုအဖြစ်အပျက်အားရှု.ံချသည့် အနေဖြင့် ရန်ကုန်၊ မန္တလေးမြို.ကြီးများတွင် ဆန္ဒပြုမှုများ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေသည်။
The Yangon Globe
ဂမ္ဘီရကြိုင်ကြိုင်နှင့် ငါးလောင်းပြိုင် လူသတ်မှု (စ/ဆုံး)
(Zaw Wonn Maung ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။)
‘ကလင် … ကလင် … ကလင်…’
‘ဟယ်လို … စခန်းမှူး ကိုမင်းမောင်လား … အခုပဲ ရဲချုပ်က ခင်ဗျားကို သူ့ရုံးခန်း လာခဲ့ပါလို့ ခေါ်နေတယ်’
‘အေးဗျာ လာတာပေါ့’ ဟုပြောပြီး ကိုမင်းမောင်က တယ်လီဖုန်းပြန်ချပြီးနောက် သူ့ရဲ့ ကုတ်အင်္ကျီထဲက စီးကရက်ဗူးကို ထုတ်၍ စီးကရက်တစ်လိပ်ကို မီးခြစ်ပေါ် ဆေးသားညီအောင် ခေါက်ပြီး မီးညှိဖွာရှိုက်လိုက်ပါတယ်။ ကိုမင်းမောင်က သူသောက်လက်စ စီးကရက်ကို သူ့ရဲ့ နှုတ်ခမ်းမှာ တေ့ဖွာရှိုက်ပြီး လွမ်းမောခြင်းနဲ့အတူ ဆေးလိပ်မီးခိုတွေကို မှုတ်ထုတ်လိုက်တယ်။
အမှုမှာ နှစ်အတော်ပင် ကြာခဲ့လေပြီ။ မည်သူမျှ အမှုမှန် မဖော်နိုင်သေးပါ။ မဖော်နိုင်သေးသည်မဟုတ်၊ မဖော်ထုတ်ရဲသေးတာပါ။
အချိန်က ၂၀၀၈ ခုနှစ် မတ်လ ၃ ရက် ငါးလောင်းပြိုင်လူသတ်မှု ရန်ကုန်မြို့လည်ခေါင်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ဖြစ်ပွားပုံမှာ ဦးချာလီ (ဦးစောကြည်ဖ) (၆ဝ နှစ်)၊ ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်စန်းစန်းမြင့် (၅၈ နှစ်)၊ သမီးများဖြစ်ကြသော ဒေါ်မြစန္ဒာ (၃၆ နှစ်)၊ မနှင်းပွင့်အေး (၂၇ နှစ်) နှင့် အိမ်ဖော် မအယ်ဖော (၁၅ နှစ်) တို့ ဦးခေါင်းတွင် သေနတ်ဒဏ်ရာများဖြင့် သေဆုံးနေသည်ဆိုသော သတင်းပင် ဖြစ်သည်။
‘အင်း … အမှုကတော့ နက်နဲလာပြီ ကိုသန်းအောင်ရေ … ကျွန်တော်တို့ ဒလဘက်ကို သွားကြရအောင်ဗျာ’ ဟု ရဲတပ်ကြပ်ကြီး ကိုသန်းအောင်ကို ခေါ်လေသည်။ ရဲတပ်ကြပ်ကြီး ကိုသန်းအောင်မှာလည်း အံ့အားသင့်သွားလေသည်။ ခုကလေးတင် ရဲချုပ်ရုံးမှ ဖုန်းလာသည်။ ဒလဘက်သွားမည်ဟု ဆိုသော စခန်းမှူး ကိုမင်းမောင်အား စဉ်းစားမရအောင်ပင် ဖြစ်မိပါသည်။
"ကိုသန်းအောင်ရေ … ကျနော်တို့ သမိုင်းဝင် ဓနုတ်စေတီတော်နားမှာပဲ ဆင်းရအောင် ဘုရားအရင်ဝင်ဖူးမယ်ဗျာ"
ကျနော်တို့ ဒလ တဘက်ကမ်းမှ စီးလာတဲ့ အငှားကားသည် သမိုင်းဝင် ဓနုတ်စေတီအနီးတွင် ရပ်ပေးလိုက်သည်။ ကျနော်နဲ့ ကိုမင်းမောင်လည်း ကားပေါ်က ဆင်းလိုက်ကြသည်။
"လာဗျိုး ကိုသန်းအောင်ရေ … သံဃာတော်တွေတော့ ရောက်ပြီး ရွတ်ဖတ်နေလောက်ပြီဗျ"
ပြောပြောဆိုဆို ကျနော်နဲ့ ကိုမင်းမောင် သမိုင်းဝင် ဓနုတ်စေတီ အနောက်ပေါက်ကနေ ခတ်သွက်သွက် ဝင်လာခဲ့ကြတယ်။ ကျွန်ုပ်မှာ တလမ်းလုံး မြိုသိပ်လာခဲ့ရသမျှ မနေနိုင်တော့ “နေပါဦး ကိုမင်းမောင်ရ … ခင်ဗျား အခု ဘုရားဖူးလာတာလား ရဲချုပ် ဖုန်းဆက်ထားတယ်လေ”
ကျွန်ုပ်မှာ မည်သို့မျှ ဆက်စပ်၍ တွေးမရတော့သည့် နောက်ဆုံးတွင် မေးလိုက်မိလေသည်။ “အင်း … ဒီလိုဗျ … ဓနုတ်စေတီတော်ကြီးကို ရှေးဘုရင်အဆက်ဆက်က ထိန်းသိမ်းခဲ့ပြီး ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်က နန်းသက်ဆက်ရန် ယတြာချေတဲ့အနေနဲ့ ထီးတင်ခဲ့တာလေ။ ဆိုလိုတာကဗျာ အဲဒီစေတီတော်ကြီးကို ဘုရင်မကြီး ရှင်စောပုကိုယ်တိုင် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခဲ့ဖူးတဲ့အတွက် ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်ကလည်း ဘုရင်မတပါးအဖြစ် သူ့ကိုယ်သူ သတ်မှတ်ပြီး ထီးတော်တင်ခဲ့တာပေါ့။ အဲဒီမှာ ဇာတ်လမ်းက စတာပဲဗျို့…။ ခင်ဗျား ဇာတ်ရည်လည်အောင် ဒေါ်မကြိုင်အကြောင်းကပဲ စရှင်းပြရတော့မှာပဲဗျို့ …။
ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်သည် ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံမြို့ ဆင်းရဲသော မိဘများမှ မွေးဖွားခဲ့သူ၊ ဖားအံနဲ့ သထုံမြို့ကြားက ရွှေကုန်းဒေသသူ ပအို့ဝ်၊ တရုတ်ကပြားပအို့ဝ်လူမျိုး ဗေဒင်လက္ခဏာ ယတြာကို အထူးယုံကြည် ကိုးကွယ်သူဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်ဟာ သူ့ခင်ပွန်းဟောင်းက တိုက်ပွဲကျသွားပြီးတဲ့နောက်မှာမှ ဗိုလ်သန်းရွှေနဲ့ ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အရင်အိမ်ထောင်နှင့် သားတယောက် ထွန်းကားဖူးပါတယ်။
ဗိုလ်သန်းရွှေ တပ်မတော်အရာရှိငယ်ဘဝက အစိုးရမှပေးသော တိုက်ခန်းငယ်လေးတွင် သားသမီး ၈ ယောက်နှင့်အတူ နေထိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ သာမန်အရာရှိငယ်များထက်စာလျှင် သားသမီးများခြင်းကြောင့် နေထိုင်စားသောက်ရေး များစွာ ကျပ်တည်းခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီအချိန်က ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင် ကိုယ်တိုင် စက်ချုပ်ပြီး အပိုဝင်ငွေ ရှာခဲ့ရပါတယ်။ မိသားစုဝင်များမှာ ထွန်းနိုင်ရွှေ (ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်၏ ပထမအိမ်ထောင်မှ )၊ ကြိုင်သန်းရွှေ (သား) ခင်ပြုံးရွှေ (သမီး)၊ ကြည်ကြည်ရွှေ (သမီး)၊ အေးအေးသစ်ရွှေ (သမီး)၊ သန္တာရွှေ (သမီး)၊ သန့်ဇော်ရွှေ (သား) တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဗိုလ်သန်းရွှေ၏ သားအငယ်ဆုံး ဘိုးတော်သန်းဇော်ရွှေ မွေးဖွားပြီးနောက် ရာထူးတက်ပြီး လာဘ်လာဘများ တိုးတက်လာသဖြင့် အကျိုးပေးသော သားဟုဆိုပြီး ဘိုးတော်သန်းဇော်ရွှေ ပြောသမျှကို ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်မှ ဗိုလ်သန်းရွှေအား နောက်ကွယ်မှ ကြိုးကိုင်ပြီး ခိုင်းပါတော့တယ်။
၁၉၈၂၊ ၈၃ ခန့် ဗိုလ်သန်းရွှေ အနောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် ဧရာဝတီတိုင်း တိုင်းမှူးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ် ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်အား အကြားအမြင်ရ ပအို့ဝ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးမှ မိဖုရားဖြစ်မည်ဟု ပြောခဲ့ဘူးပါတယ်။ အဆိုပါ တိုက်ဆိုင်မှုဟာ ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်မှ မောင်သန်းရွှေအား ဗေဒင်လက္ခဏာ ယတြာများအရ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု များလာရပါတယ်။ မောင်သန်းရွှေကိုယ်တိုင် ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင် ခိုင်းသည့် ယတြာများကို ငြင်းပယ်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ အဆိုပါ တိုက်ဆိုင်မှုဟာ ဗိုလ်သန်းရွှေရဲ့ ထူးချွန်ပြောင်မြောက်တဲ့ စစ်ရည်စစ်သွေးတွေကိုတော့ မမြင်ခဲ့ကြရပေမယ့် သူက တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ရာထူး တက်လာခဲ့ပါတယ်။
ဧရာဝတီတိုင်း (အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာ) တိုင်းမှူး ဖြစ်လာတော့ အသက် ၅၀ ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ၁၉၈၃ ခုနှစ်မှာ တိုင်းမှူးဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ ၁၉၈၃ မှာ နခတ တိုင်းမှူးနဲ့ ဧရာဝတီတိုင်းရဲ့ ဒေသပါတီကော်မတီ ဥက္ကဌရာထူးတွေပါ ချီးမြှင့်ခံရပြီး ၁၉၈၅ ခုနှစ်မှာတော့ ဒုတိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ တိုင်းမှူးဘ၀ကနေ ၁၉၈၅ ခုနှစ်မှာ ဒု-စစ်ဦးစီးအရာရှိချုပ်နဲ့ ဒု-ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ် တာဝန်ပေးခံရပါတယ်။ ၁၉၈၆ ခုနှစ်မှာတော့ ဗိုလ်ချုပ်အဖြစ် ရာထူးတိုးမြှင့်ခံရပါတယ်။
ဒေါ်မကြိုင်ရဲ့ ယတြာ ကောင်းလို့ပဲလား မသိ၊ ဗိုလ်သန်းရွှေဟာ အသက် ၅၂ နှစ်မှာ ရာထူးအဆင့် ၂ ဆင့် ခုန်တက်ပြီး ဒုတိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဖြစ်လာတဲ့အပေါ်မှာ မဆလတပ်ရဲ့ ထိပ်ပိုင်းတပ်မှူးတွေအတွင်းမှာ မကျေနပ်မှုတွေတောင် ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရပါတယ်။ ၁၉၉၂ ဧပြီ ၂၃ ရက်မှာတော့ န.ဝ.တ ဥက္ကဌ ဖြစ်လာပြီး နိုင်ငံတော်အာဏာဟာ သူ့လက်ထဲ ရောက်ရှိခဲ့ပါတော့တယ်။
၁၉၉၅၊ ၉၆ ခနှစ်လောက်က စပြီး စစ်တပ် ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များအတွင်း ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေနှင့် နီးစပ်သော အသိုင်းအဝိုင်းနှင့် နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင် အသိုင်းအဝိုင်းမှ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေသည် ယခင်ဘဝများက ကျောက်ဆည်တွင် ဆည်များ တည်ခဲ့သော သာလွန်မင်းတရားကြီး ဖြစ်ခဲ့သလို ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်သည်လည်း မိဘုရားခေါင်ကြီး ဖြစ်ခဲ့သည်ဟု သတင်းများ ပြန့်နှံ့ခဲ့သည်များ ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှစပြီး စစ်တပ်ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များအတွင်း ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်ကို မယ်တော်ကြီး ခေါ်ဆိုရမည်ဖြစ်ပြီး သားသမီးများအား သားတော် သမီးတော်ဟု ခေါ်ဆိုရမည်ဟု နှုတ်မိန့်များ ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေနေအိမ်ကိုလည်း ရှေးဘုရင်များကဲ့သို့ အဆင်အပြင်များ ဆင်ယင်ပြီး နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဗေဒင်လက္ခဏာ ယတြာများကို ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင် အလိုအရ အားလုံးစီမံခွင့်ရှိပါတယ်။
အမှတ် (၁) စက်မှုဝန်ကြီး ဦးအောင်သောင်းဆိုရင် အရင်ဆုံး အခန်းဝမှာ ရောက်ကတည်းက ဒူးထောက်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးမှ ဒူးနဲ့ လမ်းလျှောက်သွားကာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေနှင့် ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင် ခြေထောက်ကို ကိုင်ပြီး နဖူးနှင့်ထိ၍ ကန်တော့ပါတယ်။ ပြီးမှ နောက်ကိုဆုတ်ပြီး ကော်ဇောတွင် ကြုံ့ကြုံ့လေး ထိုင်ကြောင်း သိရပါတယ်။ အဲဒီအချိန်လောက်က စပြီး ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေဟာ ယခင်ဘဝက ကျောက်ဆည်မှ သာလွန်မင်းတရားကြီး ဝင်စားသည်ဆိုပြီး ဇာတ်လမ်းတွေ စခဲ့တာ အခုထက်ထိလို့ ပြောရပါမည်။ ယတြာတွေ အမျိုးမျိုးလည်း ချေခဲ့ကြပါတယ်။ ဘုရားတည်ခြင်းကိစ္စများ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ မျက်နှာပုံနှင့် ကျောက်စိမ်းဆင်းတု ထုလုပ်ပြီး ရွှေတိဂုံဘုရားတွင် ထားခြင်း၊ ညဘက်တွင် ၉ မိုင် တောင်ကုန်းပေါ်ရှိ ဆင်ဖြူတော် စီးခြင်း အစရှိသည့် ယတြာများအပြင် အရေးကြီးသည့် နေ့ရက်များကို ဗေဒင် နက္ခတ် အလိုအရ နောက်ကွယ်မှ ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်သည် သန်းရွှေအား ကြိုးကိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဆင်ဖြူတော်ကို တစ်နာရီ တစ်ကြိမ် ဖုန်းနဲ့ မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီက သတင်းပို့နေရပြီး ဆင်ကြီး စားကောင်း မကောင်း၊ နေကောင်းမကောင်း စိုးရိမ်ကြီးစွာနဲ့ စောင့်ကြည့်ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေဟာ အပူ (၁၁) မီး ငြိမ်းစေဖို့ (၁၁) ရက် (၁၁) လ (၂၀၀၅) ကို ထွက်ပြီလို့ ဝန်ကြီးတွေအား အော်ခိုင်းပြီး ရန်ကုန်က ရုံးတွေ နေပြည်တော်ကို အတင်းရွှေ့ခိုင်း၊ နေပြည်တော်ကို ရှေးခေတ်နန်းတော် အဆောက်အဦးတွေလို ဆောက်ခိုင်းကာ သူကိုယ်တိုင် သာလွန်မင်းတရားကြီး ၀င်စားလို့ဆိုပြီး ဘုရင်ရူးရူးနေတာတွေရယ်၊ ရွှေတိဂုံဘုရားက ဘုရားဌာပနာတွေကို ရွှေ့ဖို့ လုပ်ခိုင်းတာတွေရယ်၊ ရွှေတိဂုံဘုရားက ကျောက်စိမ်းဘုရားကို နိုင်ငံတကာအကြီးအကဲတွေ လာရောက်တိုင်း ဦးခိုက်ခိုင်းတာတွေ၊ ဘုရားရင်ပြင်တော်မှာ လုံခြုံရေးအတွက် ဆိုပြီး သေနတ်တကားကားနဲ့ ဦးသန်းရွှေအနားမှာ တွေ့မြင်ရတာတွေ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နာမ်နှိမ်ဖို့ ကတ်ကင်းဖြစ်တဲ့ ကြက်ဆူပင် စိုက်ခိုင်းတာတွေ၊ အိမ်တော်ကို လာတဲ့ ဧည့်သည်တွေကို ဖျာခင်းပြီးအောက်မှာ ထိုင်ခိုင်းပြီး ဆိုဖာပေါ်ရှိ သူ့ကို ဖူးတွေ့ခိုင်းတာတွေဟာ အစွဲအလန်းကြီးမားမှုနဲ့ မလုပ်သင့်မလုပ်ထိုက်တဲ့ အောက်လမ်းနည်းတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ယတြာတွေ အမျိုးမျိုးလည်း ချေခဲ့ကြပါတယ်။ အင်္ဂါနံဖြစ်သော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နံနှိမ်တဲ့အနေနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ နောက်ဆုံးမင်း နေပြည်တော်လုပ်ခဲ့သည့် မန္တလေးမြို့ကျုံး၏ ထောင့်လေးထောင့်မှာ အင်္ဂါနံ စဉ့်အိုးထဲတွင် ဆီထည့်ပြီး အင်္ဂါနေ့ နံနက်အချိန် မြေမြုပ်ခိုင်းသည့် ယတြာအားလည်း လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်လောက်အထိလဲဆိုရင် မန္တလေးက မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီးကိုတောင် ပတ္တမြားမျက်ရှင် လိုချင်လို့ ဗိုက်ဖောက်ခဲ့ဖူးတယ်လေ (၁၉၉၅ /၉၆) လောက်တုန်းကပေါ့။
အယူအဆ အစွဲအလမ်း ကြီးမားပြီး အာဏာရူးသွပ်နေတဲ့ မကြိုင်ကြိုင်ဟာ ဗေဒင်နက္ခတ်အရ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နာမ်နှိမ်စေဖို့ အင်္ဂါသား ဗိုလ်စိုးဝင်းကို ၀န်ကြီးချုပ်အဖြစ် သွေးထိုးစီစဉ်ခဲ့ပြီး၊ နန်းပြောင်းနန်းလွှဲဖြစ်မှသာ ယတြာအရ ချေပြီးသား ဖြစ်မည်ဟု ကိုးကွယ်တဲ့ ဆရာများက ပြောကြပါတယ်။ ဦးအောင်သောင်း ကိုးကွယ်တဲ့ သင်္ကန်းကျွန်းမှ အကြားအမြင်ဆရာမတစ်ဦးရဲ့ တိုက်တွန်းမှုအရ ကြက်ဆူပင် စိုက်ခိုင်းခဲ့သလို မပြောင်းရအောင် ပြောင်းဖူး စိုက်ခိုင်းစေပြီး၊ ကြက်ဆူမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကတ်ကင်းဖြစ်သော်လည်း ယတြာအချေကောင်းမှုကြောင့် တန်ပြန်သက်ရောက်ကာ တပြည်လုံး ကျက်ကျက်ဆူသွားခဲ့ရပါတယ်။ နိုင်ငံတော်အလံ အပြောင်းအလဲ အခမ်းအနားမှာလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နာမ်နှိမ်တဲ့အနေနှင့် (စုကြည်) စင်ကြယ်ဘိနပ် စီးစေခဲ့ပါတယ်။
အမှတ် ၁၂၆၊ စိမ်းလဲ့ကန်သာလမ်း၊
အချိန်မှာ ၂၀၀၈ ခုနှစ် မတ်လ ၃ ရက်နေ့ ဖြစ်၏။
ရန်ကုန်မြို့၏ လူကုံထံရပ်ကွက်တစ်ခုဖြစ်သော စိမ်းလဲ့ကန်သာလမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ် နေရာသည် အစောင့်အကြပ် ထူထပ်ပြီး တစိမ်းတရံ မျက်နှာမွဲတဦး ဝင်ရောက် ဖြတ်သန်းရန်ပင် လွယ်ကူလှသည့် နေရာမဟုတ်။ ထိုစိမ်းလဲ့ကန်သာလမ်း၊ အမှတ် ၁၂၆ တွင်၊ ဦးချာလီ (ဦးစောကြည်ဖ) (၆ဝ နှစ်)၊ ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်စန်းစန်းမြင့် (၅၈ နှစ်)၊ သမီးများဖြစ်ကြသော ဒေါ်မြစန္ဒာ (၃၆ နှစ်)၊ မနှင်းပွင့်အေး (၂၇ နှစ်) နှင့် အိမ်ဖော် မအယ်ဖော (၁၅ နှစ်) တို့ မိသားစုဝင် ၄ ဦးနှင့် အိမ်အကူ လုပ်သားတဦးတို့ နေထိုင်ကြလေသည်။ ရန်ကုန်မြို့ မိုးကုတ်သူဌေး ဦးမြမောင်၏ အဆက်အနွယ်များ လည်းဖြစ်ကြလေသည်။ မိုးကုတ်ဦးမြမောင်ဆိုလျှင် ရှေ့မီနောက်မီ ပုဂ္ဂိုလ်တို့ သိကြပေသည်။ ဆွေမျိုးစဉ်ဆက် မည်မျှချမ်းသာကြောင်း ယခုတိုင် သားသမီးမြေးတို့ကိုပင် ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်၍ ငွေကြေးသုံးစွဲရန် ထားရှိခဲ့ကြောင်း အများသိပင်ဖြစ်၏။ မိုးကုတ်ဦးမြမောင်မှာ ရှေးအစဉ်အဆက်မှပင် ပတ္တမြားတွင်းများ ပိုင်ခဲ့သူဖြစ်ရာ၊ ယခုတိုင် ပတ္တမြားများကို သေတ္တာများဖြင့် သိမ်းဆည်း သိုလှောင်ထားသူဖြစ်ပေသည်။
တနေ့တွင် နိုင်ငံတော်ဧည့်ရိပ်သာနှင့် မဝေးသလို လူကုံထံများနှင့် သံတမန်များ နေထိုင်ကြသည့် တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းတွင် လူစိတ်ဝင်စားခံရဆုံး လူသတ်မှုတစ်မှု ဖြစ်ခဲ့လေသည်။ နေ့ခင်းအချိန်တွင် ကားဖြင့် ၀င်လာပြီး အိမ်ရှိ မိသားစုအားလုံးကို သေနတ်ဖြင့် ပစ်သတ်သွားခဲ့ခြင်းအား အဆိုပါလမ်းသွယ်ရှိ နိုင်ငံတော် ဧည့်ဂေဟာတ၀ိုက်တွင် ထားရှိသည့် လုံခြုံရေးရဲများ မသိရှိလိုက်သည့် အဖြစ်ကလည်း မယုံနိုင်စရာ ကောင်းလောက်အောင် ထူးဆန်းနေသည်ဟု ရန်ကုန်မြို့ခံအချို့ ဝေဖန်ခဲ့ကြသည်။ အသတ်ခံရသူများမှာ တောင်ပိုင်စော်ဘွားကြီး စပ်ခွန်ဖ၏ သားဖြစ်သူ ဦးချာလီနှင့် မိုးကုတ် ဦးမြမောင်တို့၏ သမီးဖြစ်သူ ဒေါ်စန်းစန်းမြ၊ သမီး ၂ ဦးနှင့် အိမ်ဖော်တဦးတို့ ဖြစ်သည်။ သေနတ်သမားများက လက်၊ မျက်နှာနှင့် ဦးခေါင်းတို့ကို သေနတ်ဖြင့် အချက်များစွာ ပစ်သတ်ခဲ့ပြီး မီးခံသေတ္တာအတွင်းမှ ဒေါ်လာငွေများ တန်ဖိုးကြီး စိန်ရွှေ ရတနာများအား ယူဆောင်သွားခဲ့ကြသည်။
ရှင်စောပု ဘုရင်မကြီး ဝတ်ဆင်ခဲ့သည့် နားကပ်တစ်ဘက် … အင်း … ဇာတ်လမ်းကတော့ တော်တော်စိတ်ဝင်စား စရာကောင်းပြီး တော်တော်လည်း ယုတ်မာပက်စက်တာပဲ …
ကိုမင်းမောင်က သူ သောက်လက်စ စီးကရက်ကို သူ့ရဲ့ နုတ်ခမ်းမှာ တေ့ဖွာ ရှိုက်ပြီး ဆေးလိပ်မီးခိုတွေကို မှုတ်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီနောက် သူက “ဒါပေါ့ဗျာ .. သူတို့ရဲ့ လောဘက အတောမသတ်နိုင်သလို အမှားတွေကို မှားပြီးရင်း မှားနေတာတွေတောင် မမြင်နိုင်ပဲဖြစ်ရတာပဲ။”
‘‘ကိုမင်းမောင် ခင်ဗျားလည်း တော်တော် လေ့လာထားတာပဲဗျ’’
‘‘ဒါပေါ့ဗျာ ကျွန်တော်တို့က ရဲဝန်ထမ်းဆိုတော့ အဘက်ဘက်က သိအောင် လုပ်ထားရတာပေါ့ …”
‘‘ဒါနဲ့ ဆက်စမ်းပါဦး ဓနုတ်စေတီတော်ကြီးကို လာရတဲ့အကြောင်းက ဘယ်လိုများ ပတ်သက်နေသလဲဗျ။”
‘‘အင်း ခုနက ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲ ဒေါ်မကြိုင်က မိဖုရားရူး ရူးနေရာကနေ ဘုရင်မပါ ဖြစ်ချင်လာတယ်လေ။ အဲဒီတော့ ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်ကလည်း ဘုရင်မတပါးအဖြစ် သူ့ကိုယ်သူ သတ်မှတ်ပြီး ဘယ်သူက ဖွလိုက်လဲ မသိပါဘူး၊ ဘုရင်မကြီး ရှင်စောပုရဲ့ ဝတ်ဆင်ခဲတဲ့ နားကပ်တစ်ဘက် ရှိတယ် ဆိုတဲ့ သတင်းအနံ့ ရပါလေရော …။ အဲဒီမှာ မရမက ရှာပုံတော် ဖွင့်တော့တာပဲဗျို့။”
“ဒါနဲ့ အဲဒီနားကပ်က ဘယ်သူ့ဆီမှာတဲ့လဲ”
“ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က ၂၀၀၈ ခုနှစ် မတ်လပိုင်းမှာ နေ့ခင်းကြောင်တောင်ကြီး မြို့လယ်ခေါင်မှာ အသတ်ခံရတဲ့ ငါးလောင်းပြိ်ုင် လူသတ်မှုကို ခင်ဗျားမှတ်မိလား …”
“အင်း … အဲဒီ အသတ်ခံရတဲ့ ငါးယောက်က မိုးကုတ်ဦးမြမောင်နဲ့ ပတ်သက်နေတယ်လေ”
“အဲဒါလည်း ကျုပ် သိပါတယ်ဗျ ကိုမင်းမောင်ရ … မိုးကုတ်ဦးမြမောင်ဆိုရင် ရှေ့မီနောက်မီပုဂ္ဂိုလ်တို့ အကုန်သိကြပါတယ်။ ဆွေမျိုးစဉ်ဆက် မည်မျှချမ်းသာကြောင်း ယခုတိုင် သားသမီးမြေးတို့ကိုပင် ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်ပြီး ငွေကြေးသုံးစွဲရန် ထားရှိခဲ့ကြောင်း အားလုံးသိနေကြတာပဲ။ မိုးကုတ်ဦးမြမောင်က ဟိုးရှေးအစဉ်အဆက်ကထဲက ပတ္တမြားတွင်းတွေ ပိုင်ခဲ့တယ်၊ ယခုတိုင် ပတ္တမြားတွေကို သေတ္တာများဖြင့် သိမ်းဆည်း သိုလှောင်ထားတဲ့သူပေါ့ဗျာ။”
“ဒါပေါ့ဗျာ အခုမှ လိုရင်းရောက်တော့မှာ .. အဲဒီ မိုးကုတ်ဦးမြမောင် ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေထဲမှာ ရှင်စောပုဘုရင်မကြီး ဝတ်ခဲ့တဲ့ နားကပ်တစ်ဘက် ရှိတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကြောင့်ပေါ့ဗျာ”
“ဗျာ … ဘယ်လို … ခင်ဗျား ဆိုလိုတာက .. လူသတ်တရားခံက …”
နိုး … နိုး … နိုး … ကိုသန်းအောင် … ကျုပ်က သူတို့ တိုက်ရိုက်သတ်တယ်လို့ မဆိုလိုဘူး။ တနည်းနည်းနဲ့ ပတ်သက်နေတယ်လို့ ပြောတာ ...”
“ကျုပ်တော့ … နားမလည်တော့ဘူးဗျာ … လိုက်မမီလို့လားတော့မသိ … ခင်ဗျားပဲ ရှင်းပြပေတော့ဗျို့ …”
“ဒီကိစ္စရဲ့တရားခံကို သိလည်းသိရော အကုန်လုံးက လက်ရှောင်နေကြတာလေ ဘယ်သူမှ အစ မဖော်ရဲတော့ဘူး။ အခုလည်း ကျုပ်ကို ရဲချုပ် ဖုန်းဆက်တာ ဒီအမှုကိစ္စကို နှုတ်ဆိတ်နေဖို့ပဲဗျို့ …”
“ရဲချုပ်ခင်ရီနှင့် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်မောင်ဦးတို့ နှစ်ယောက်လုံး သိပြီး အဲဒီအမှုကို ဆက်လက်ကိုင်တွယ်ဖို့ လက်တွန့်နေကြတယ်လေ။ ကျုပ်က ဒီဓနုတ်စေတီကို လာရတာက ဒေါ်မကြိုင် ထီးတင်ခဲ့တဲ့အကြောင်း စိတ်ဝင်စားလို့ လာခဲ့တာ… အဲဒီ ရှင်စောပု ဘုရင်မကြီးရဲ့ နာကပ်တစ်ဘက်ကို ရ မရတော့ မသိဘူး။ အဲဒီ ငါးလောင်းပြိုင် လူသတ်မှုဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်း ဒေါ်မကြိုင်က နန်းသက်ဆက်ဖို့ ယတြာခြေမယ် ဆိုပြီး ဟောဒီ ရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင် ဓနုတ်စေတီတော်ကြီးကို ထီးတင်ဖို့ လုပ်တော့တာပဲ။”
“ကဲ လာဗျာ … ဟော ဟိုမှာ ကျုပ် တပည့်လေး နေတဲ့ အိမ်ပဲ အဲဒီမှာ စေတီတော်ကြီး ထီးတင်စဉ်က အဖြစ်အပျက်တွေ မေးကြရအောင် …”
“ကဲ မောင်လေးမောင်ရေ မင်းပဲ ရှင်းပြလိုက်ပါကွာ။ ဓနုတ်စေတီတော်ကြီး ထီးတင်တုန်းက အဖြစ်အပျက်တွေကို …”
“ဒီလိုဗျ … တလောက ၂၀၀၉ ခုနှစ် မေလ ၇ ရက်နေ့က ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင် ဦးစီးပြီး ထီးတင်လှူခဲ့ပြီးနောက် ၂၃ ရက်အကြာမှာ မေလ ၃၀ ရက်နေ့ ညနေ ၃ နာရီ ၅ မိနစ်ခန့်မှာ ပြိုကျခဲ့တာ ခင်ဗျားသိတယ်မဟုတ်လား …”
“အေး … ဗျ .. ကျွန်တော် ကြားမိလိုက်တယ်”
“အဲဒီ .. ဓနုတ်စေတီတော်ကြီး ပြိုကျခဲ့စဉ်က ရုတ်တရက် အမှောင်ကျလာပြီး မီးလုံးအနီကြီးတွေ ဖြတ်သန်းလာတာ မပြိုကျမီ ညပိုင်းအချိန်များမှာ စေတီကြီး၏ အရိပ်ကို ထီးတော်မပါဘဲ ကောင်းကင်မှာ ဖူးတွေ့ရတယ်”
“နို့ … နေပါအုန်း၊ အဲဒါနဲ့ ဘယ်လိုများ ပတ်သက်နေတုန်းဗျ။”
“အဲဒီအချိန်ကထဲက စပြီး ဘယ်သူမှ ထီးမတင်ရဲတောဘူးဗျို့၊ အထူးသဖြင့် ဒေါ်မကြိုင်တို့မိသားစုပေါ့ဗျာ”
“အဲဒီတုန်းက စေတီပြိုကျမှုကြောင့် လူ ၂၀ ထက်မနည်း သေဆုံးခဲ့ပြီး ၁၀၀ ကျော် ဒဏ်ရာရခဲ့ကြပါတယ်။ အခုတော့ ဒေသခံတွေနဲ့ပဲ ရပ်ရွာက ဦးစီးပြီးတော့ ထီးတော်တင်ဖို့ လုပ်နေကြရတာပေါ့။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးနဲ့ ဒေါ်မကြိုင်တို့ကတော့ ဒီဘုရားကြီးအတွက် လှူဒါန်းမှု မပြုတော့ဘူးလို့ သိရတာပဲ ... ဒီတခေါက် ထီးတင်ပွဲနဲ့ စိန်ဖူးတော်တင်ပွဲကို နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲ မိသားစုဝင်တွေ တစ်ဦးမျှ မပါဝင်တော့ဘူးလို့ သိရတယ်။ ရွှေသံလွင်ကုမ္ပဏီက မြေသားအပျော့အမာ စစ်ဆေးတာတွေ လုပ်နေကြတယ်လေ။”
“ဒီစေတီတော်ကြီးက ဘုန်းတန်ခိုးကြီးမားတဲ့ ဘုရင်မင်းအဆက်ဆက်က ပြုပြင် ကိုးကွယ်ခဲ့ကြတာ .. သာသနာသက္ကရာဇ် ၂၄၀ ပြည့်နှစ်မှာ မြတ်စွာဘုရား ဆံတော်နှစ်ဆူနှင့် ဓာတ်တော် ၂၄ ဆူကို ဌာပနာပြီး သထုံမင်း စူဠသီရိမာသောက အထောက်အပံ့နှင့် လေးသည်ရွာမှာ တည်ထားခဲ့တယ်။ စတည်ခါစက ဒုန္နိဂ္ဂဟ စေတီလို့ ဘွဲ့အမည်တွင်ပြီး ခေတ်တွေပြောင်းလာတော့ ဓနုတ်စေတီလို့ ခေါ်လာကြတာပေါ့ဗျာ။ အင်း … မြန်မာသက္ကရာဇ် ၇၁၅ ခုနှစ်လောက်က ဟံသာဝတီဘုရင် ဗညားဦး မြန်မာသက္ကရာဇ် ၇၅၆ မှာ ဘုရင် သုတသောမ ရာဇာဓိရာဇ် တို့က ပြုပြင် တည်ထား ကိုးကွယ်ခဲ့ကြပြီး သက္ကရာဇ် ၈၁၉ ခုနှစ်မှာငလျင်လှုပ်ပြီး ပြိုကျခဲ့တော့ ဘုရင်မကြီး ရှင်စောပုကနေပြီး ပြန်လည်ပြုပြင် ကိုးကွယ်ခဲ့တယ်လေ။ အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ သက္ကရာဇ် ၈၁၉ မှာ ဓမ္မစေတီမင်း၊ သက္ကရာဇ် ၉၀၁ ခုနှစ်မှာ တောင်ငူဘုရင် တပင်ရွှေထီး၊ သက္ကရာဇ် ၉၂၆ မှာ ဘုရင့်နောင်၊ သက္ကရာဇ် ၁၀၀၆ မှာ သာလွန်မင်း၊ သက္ကရာဇ် ၁၀၄၁ မှာ မင်းရဲကျော်ထင်၊ သက္ကရာဇ် ၁၁၇၃ မှာ ဘိုးတော်မင်းတရား တို့က တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့ကြပါတယ်။” ဟု လူငယ်လေး မောင်လေးမောင် က ရှင်းပြလေသည်။
“ဘယ်ဆိုးလို့တုန်းဗျ ကိုမင်းမောင်၊ ခင်ဗျားတပည့်က ဗဟုသုတ တော်တော်စုံသားဗျ”
“ဒါပေါ့ ကိုသန်းအောင်ရာ ကျုပ်ကလည်း ဒီလိုတော်တဲ့ လူငယ်တွေ ပေါင်းထားရတာပေါ့ဗျ”
“ကဲ .. ဆရာတို့လည်း နားနားနေနေ လက်ဖက်ရည်လေး သောက်ပြီး စကားပြော၊ ကျွန်တော်ကတော့ ဘုရားမှာ သံဃာတော်တွေ ကြွလာလို့ သွားပြီး လုပ်အားပေးလိုက်ဦးမယ်” ဟု ပြောပြောဆိုဆိုပင် ထိုလူငယ်လေး မောင်လေးမောင်မှာ စေတီတော်ကြီးဘက်သို့ ထွက်သွားပါတော့တယ်။
“ဒါနဲ့ ကိုမင်းမောင်ရ … ကျွန်တော် မသိလို့ မေးပါရစေဦး။ အဲဒီ ဒေါ်မကြိုင်က ဘာဖြစ်လို့ ထီးတော် ပြန်မတင်ရဲတော့တာလဲဗျ”
“ဒီလို ကိုသန်းအောင်ရဲ့ ပထမတော့ ဒေါ်မကြိုင်က သူ့ရဲ့ အခါတော်ပေးတွေက မိဘုရားဖြစ်မယ်လို့ ဟောလိုက်တယ်လေ။ အဲဒီမှာ သူ့ကိုယ်သူ မိဖရားဖြစ်ချင်တာနဲ့ ယတြာတွေ အမျိုးမျိုးချေခဲ့တယ်။ တိုက်ဆိုင်မှုလားတော့မသိဘူး၊ သူ့ယောက်ျား ဗိုလ်သန်းရွှေကလည်း ရာထူးအဆင့်ဆင့် တက်ပြီး နောက်ဆုံးအဆင့်အထိ နိုင်ငံတော်အာဏာကို သူ့လက်ထဲ ရခဲ့တာပဲမဟုတ်လား။ အခုအချိန်အထိ ဘယ်သူ လှန်ရဲလို့လဲ။ အခု ငါးလောင်းပြိုင် လူသတ်မှုမှာ သူတို့မိသားစုနဲ့ ပတ်သက်နေတယ်လည်း ဆိုရော အကုန်လုံးက တွန့်သွားကြတာ အမှုမှန် ဘယ်သူမှ မလိုက်ရဲဘူး။ ကျုပ်တို့ကိုတောင် နှုတ်ဆိတ်နေဖို့ ပြောနေကြတာ။ ဗိုလ်ခင်ညွန့်တောင် သူ့ကို လုံခြုံရေးပေးမှ ဒီအမှုကိစ္စ ပြောနိုင်မယ်တဲ့လေ ...။ အဲဒီတော့ ဒေါ်မကြိုင်က မိဘုရားရူး ရူးနေရာက ဘုရင်မပါဖြစ်ချင်နေတာ သူ့ကို ဘယ်သူမှ မော်မကြည့်နိုင်အောင် လုပ်ချင်နေတာ။ အဲဒီတော့ သူရထားတဲ့ နေရာကနေပြီး ပြန်ပြုတ်မကျသွားအောင် နည်းမျိုးစုံသုံးပြီး နှိပ်ကွက်တော့တာပေါ့။ သူက ဘုရင်မဖြစ်ချင်လာတယ်လေ။ အဲဒီတော့ ရှင်စောပု ဘုရင်မကြီးကို အားကျပြီး အဆောင်အယောင်တွေ လိုချင်လာတော့တာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ရဲ့ မင်းမဲ့စရိုက်ကြောင့် ဘုရားတန်ခိုးပြတာလား မသိ၊ နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေ အကုန်လုံး နောက်ထပ် ထီးတော်မတင်ရဲကြတော့ဘူးဗျ။
အဲဒီအကြောင်းတွေ ပြောရရင်တော့ ‘စိန်စီသောည’ ကနေ စရမှာပဲဗျို့ …။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ သမီးတော်လေး၏ မင်္ဂလာပွဲ "စိန်စီသောည" ၏ ဇာတ်လမ်းအစပင် ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်က ကြီးမားတဲ့ စိန်ဘယက်ကြီးကို အခန့်သားဆွဲရင်း အနောက်တိုင်းသားတယောက်၏ မျိုးစေ့ကို လွယ်ကာ လူပုံအလည်၌ မျက်နှာထားတင်းတင်းဖြင့် နွားရွေးပွဲကို ဆင်နွှဲခဲ့သည့် မောင်သန်းရွှေ ဒေါ်မကြိုင်တို့၏ ရှုမငြီးသော သမီးကညာ၏ မင်္ဂလာပွဲမှ စတင်ကာ သူကြွယ်မိသားစုခမျာ လုပ်ကြံခံလိုက်ရပါတယ်။
ထိုဦးမြမောင် ဆွေမျိုး - အသတ်ခံရသူတို့သည် လုပ်ငန်းဆောင်တာ ဆက်သွယ်မှုအရ မန္တလေးတိုင်းမှူး ဖြစ်ခဲ့သော ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲမြင့် (တိုင်းမှူးဘ၀က ဗိုလ်ချုပ်ရဲမြင့်)၊ ဇနီး ဒေါက်တာဒေါ်တင်လင်းမြင့် နှင့် ခင်မင်ရင်းနှီးခွင့်ရခဲ့ကြပါတယ်။ ထိုသို့ခင်မင်ရာမှ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေသမီး မင်္ဂလာဆောင်မည်ရှိသောအခါ ခေတ္တပွဲနေပွဲထိုင် ငှားရမ်းပါမည့်အကြောင်း ဒေါက်တာဒေါ်တင်လင်းမြင့်မှတစ်ဆင့် စကားကမ်းလှမ်း ငှားရမ်းခဲ့ပြီး ဒေါက်တာ ဒေါ်တင်လင်းမြင့်နှင့် မျက်နှာနာသည်ကလည်း တစ်ကြောင်း၊ အာဏာအရှိန်အ၀ါကြောင့်တစ်ဖုံ ငှားရမ်းလိုက်ကြပါတယ်။
မင်္ဂလာပွဲပြီးသည့်အခါ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသမီးများက ဒေါက်တာဒေါ်တင်လင်းမြင့်မှတစ်ဆင့် စကားပါးလိုက်၏။ စိန်များကို ရောင်းပါ။ ဈေးဘယ်လောက် ဖွင့်မည်လည်းဟု အမေးခိုင်းလိုက်ရာ မိုးကုတ်ဦးမြမောင်မှာ ရှေးအစဉ်အဆက်မှပင် ပတ္တမြားတွင်းများ ပိုင်ခဲ့သူဖြစ်ရာ၊ ယခုတိုင် ပတ္တမြားများကို သေတ္တာများဖြင့် သိမ်းဆည်း သိုလှောင်ထားသူဖြစ်ပေရာ ငွေမလိုချေ။ "ငွေမလို၊ သည်စိန်တို့မှာ ဆွေမျိုးအစဉ်အဆက် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခဲ့သော စိန်များဖြစ်သဖြင့် မရောင်းချနိုင်ပါကြောင်း၊ မိမိတို့မှာ ဆွေမျိုးဂုဏ်ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန် တာဝန်ရှိပါကြောင်း ကွယ်လွန်သူတို့မှ ပြန်ကြားခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ထိုအခါ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသမီးများမှ "မြန်မာငွေမို့ ငြင်းသလား။ ဒေါ်လာနှင့်ပေးချေပါမည်။ ကြိုက်တဲ့ဈေးပြောပါ၊ ဒေါ်လာနှင့်ချေမည်" ဟု ပြန်ပြောတိုက်တွန်းခိုင်းပြန်ပါတယ်။ ကွယ်လွန်သူတို့မှ "မည်သို့မှ မရောင်းနိုင်ပါကြောင်း၊ ဒေါ်လာလည်း မလိုအပ်ပါကြောင်း၊ အခြားပစ္စည်း ဆိုလျှင် အလကားပင် လက်ဆောင်ပေးနိုင်ပါကြောင်း၊ ဤစိန်တို့မှာ ဆွေမျိုးစဉ်ဆက်ထိန်းသိမ်းရမည်ဟု အဖိုး မသေမီကပင် တာဝန်ပေးခဲ့သော စိန်များဖြစ်သဖြင့် မရောင်းနိုင်ကြောင်း" ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်ဟု သိရပါတယ်။
လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခံရသည့် မိသားစုသည် ၄င်းတို့ မိသားစု ပိုင်သော ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက်ရတနာကို ပြန်လည်ကာ မိကြိုင်ထံမှ ဖုန်းဆက်တောင်းခံရာ နေ့ရွှေ့ ညရွှေ့ လုပ်နေသည့် ချစ်တီးမယားအကျင့် ကျင့်ကြံသော မိကြိုင်က စိတ်ကွက်တော်မူခြင်းဖြစ်၏။ အဲဒီနောက်မှာ ဘုရင်မ ရှင်စောပုရဲ့ နားကပ်တစ်ဘက် သတင်းကလည်း ထွက်လာတော့ ဘုရင်ရူးရူးနေတဲ့ မိသားစုအတွက် လိုချင်စရာ ဖြစ်လာတော့တာပေါ့ နောက်ဆုံးတွင် မိကြိုင် စိတ်ကွက်တော်မူကာ ၀ လူမျိုးတစ်ယောက်နှင့် ယိုးဒယားလူမျိုး လေးယောက်ပါသော ကြေးစားလူသတ်သမားအဖွဲ့ကို ငှားရမ်းကာ လုပ်ကြံခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒါကို ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအေးနှင့် နိုင်ငံတကာသံရုံးများသို့ တိုးတိုးတိတ်တိတ် သတင်းပေးပို့ခဲ့ကြကာ သူတို့ ပါဝင်ပတ်သက်မှုမရှိဟု လက်ဦးမှုရယူထားပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်မြင့်ဆွေ၊ ဗိုလ်ချုပ်တင်အောင်မြင့်ဦး၊ ဗိုလ်ချုပ်ရွှေမန်းတို့လည်း ထိုကိစ္စကို သိရှိကြသော်လည်း ဒေါ်မကြိုင်နှင့် ဗိုလ်သန်းရွှေတို့ လုပ်သည့်ကိစ္စဖြင့်သဖြင့် ထိုရဲစွမ်းသတ္တိနှင့် အလွန်တရာ ပြည့်စုံဟန် ဟန်ရေးပြလေ့ရှိသော ဗိုလ်ချုပ်များလည်း ထမိန်ဖြင့် အအုပ်ခံရမည်ကို ကြောက်ရွံ့လှသဖြင့် နှာစေးနေကြပေသည်။ ရဲချုပ်ခင်ရီနှင့် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်မောင်ဦးတို့ကတော့ သတ္တိရှိ၍ပေလော ပိုမိုအကြောက်လွန်၍လော မသိ၊ ထိုအမှုကို နှုတ်ဆိတ်လို့ နေကြပေတော့သည်။
ပထမအကြိမ် မှုခင်းအသွားအလာ စစ်ဆေးစဉ်က ကျည်ဆံနံပါတ်များမှာ သွားလေသူ ဗိုလ်ချုပ်မောင်ဘို (ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်ဘို) ၏ နံပါတ်များ၊ အခြား မသွားသေးသူ ဗိုလ်ချုပ်တစ်ယောက်၏ ကျည်နံပတ်များ တွေ့ရှိရသည်ဟု သိရ၏။ သတင်းအမှန်မှာ "ရွှေသမင်ဘယ်က ထွက်၊ မင်းကြီးတာမှ ထွက်" ဟု ဆိုရပေချိမ့်မည်။
မောင်ဘို သေဆုံးပြီးနောက် အမှုမှန်ဖော်ထုတ်မည်ဟု သတင်းသန့်သန့် ထွက်လာ၏။ သို့သော် ဤအစိုးရလက်ထက်၌ ဤအမှုမှန် မဖော်ထုတ်နိုင်ဟု ယုံကြည်ခဲ့ပေသည်။ မကြာခင်ကမှ မှုးယစ်ဆေးဝါးကိစ္စနဲ့ ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံရတဲ့ အောင်ဇော်ရဲမြင့်ရဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းကနေ ငါးလောင်းပြိုင် လူသတ်မှုမှာ နအဖ စစ်ဘီလူးခေါင်းဆောင် သန်းရွှေရဲ့မိန်းမ ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင် ပါဝင်ပတ်သက်နေတယ် ဆိုတဲ့ အသံထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ မူးယစ်ဆေးဝါးကိစ္စနဲ့ ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံရတဲ့ အောင်ဇော်ရဲမြင့်က သူ့ရဲ့ကိစ္စကို အရေးယူဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင် ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင် ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တဲ့ ဒီငါးလောင်းပြိုင် လူသတ်မှုကို ဖော်ထုတ်မယ်လို့ ပြန်လည်ခြိမ်းခြောက်တယ်လို့ အောင်ဇော်ရဲမြင့်နဲ့ ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းကနေ သတင်းတွေ ပြန်ထွက်လာပါတယ်။
ကဲ … ဇာတ်လမ်းကတော့ အဖြေက ရှင်းနေပြီ ကိုသန်းအောင်ရေ ဒီအမှုမှာတော့ ကျွန်တော်တို့တတွေလည်း လက်လျှော့လိုက်ရတဲ့ အမှုတစ်ခုပါပဲဗျာ … နောက်ဆက်တွဲ သတင်းတွေကတော့ စောင့်ကြည့်လိုက်ကြအုန်းပေါ။ ကဲဗျာ … အချိန်လည်း မနည်းတော့ဘူ။ ရန်ကုန်ဘက်ကမ်းကို ပြန်ကြရအောင်၊ ရဲချုပ်ရုံးကိုလည်း ဝင်ရအုန်းမယ် …။
ရန်ကုန်၊ မေ ၁၂ ၊ ၂၀၁၁ (YPI) - ရန်ကုန်မြို့ စိမ်းလဲ့ကန်သာလမ်းတွင် ၂၀၀၈ ခုနှစ် မတ်လက ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ငါးလောင်းပြိုင်လူသတ်မှုမှ ကျန်ရစ်သည့် ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းများအား သေဆုံးခဲ့သူများ၏ ဆွေမျိုးရင်းသူ နှစ်ဦးကို ခွဲဝေပေးလိုက်ပြီဟု သိရပါတယ်။ လူသတ်မှု ဖြစ်ပွားပြီး ၃ နှစ်ကျော်ကြာသည်အထိ တရားခံကို ဖမ်းဆီးနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘဲ အမွေခွဲဝေခြင်းကို တရားရုံးမှတဆင့် ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ လူသတ်သမားများအနေဖြင့် မီးခံသေတ္တာ ၁၀ လုံးအနက် ၇ လုံးသာ ဖွင့်နိုင်ခဲ့ပြီး ၃လုံးမှာ ဖွင့်မရသဖြင့် ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ ကျန်ရစ်သည့် မီးခံသေတ္တာတွင်းမှ ဒေါ်လာငွေများ၊ စိန်နှင့် အခြားရတနာ အများအပြား သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့သည်ဟု ထိုစဉ်က ပါဝင်ခဲ့သူ ရဲဝန်ထမ်းတဦးက ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ လူသတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးနောက် နေအိမ် ကားများနှင့် စိန်ရွှေ ရတနာများအား အစိုးရက တာဝန်ယူ သိမ်းဆည်းထားခဲ့ပါတယ်။ ပိုင်ဆိုင်မှု ပစ္စည်းများ၏ တန်ဖိုးမှာ အလွန်များပြားပြီး အသတ်ခံရရာ အိမ်နှင့် ကား ၄ စီးအား ကျပ် သိန်း ၃ သိန်းဝန်းကျင်ဖြင့် တန်ဖိုးဖြတ်ခဲ့သလို ကျပ် သိန်း ၂ ထောင် ၃ ထောင်တန်သည့် တစ်ပွင့်စိန်များလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
သေဆုံးသူ ဦးချာလီ၏ ညီဖြစ်သူနှင့် ဒေါ်စန်းစန်းမြဘက်မှ အဖေတူ အမေကွဲ မောင်ဖြစ်သူတို့အား တ၀က်စီ ဝေခွဲရရှိခဲ့ပြီး အတော်များပြားသည့် ငွေပမာဏကို အစိုးရဘဏ္ဍာနှင့် မေတ္တာကြေးအဖြစ်လည်း ပေးအပ်ခဲ့ရသည်ဟု ဆိုပါတယ်။ အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာတွင် မိသားစုအရင်းများအားလုံး သေဆုံးခဲ့ကြရသဖြင့် လူသတ်သမားများ လက်ထဲမည်၍ မည်မျှ ပါသွားသည်။ မည်မျှ ကျန်ရစ်သည်ကို အတိအကျ ပြောနိုင်သူမရှိဟုလည်း သတင်းရင်းမြစ်များက ဆိုပါတယ်။ လူသတ်မှုဖြစ်ပွားပြီး နောက် ၃ လကြာမျှ ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံခဲ့ရသည့် ဦးချာလီနှင့် ဒေါ်စန်းစန်းမြ၏ သားမက်ဖြစ်သူ ဦးသုဇော်အား ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းများ ခွဲဝေပေးခြင်းမရှိခဲ့ပါ။
နောက်ထပ် သတင်းတစ်ခုကတော့ မိုးကုတ်သူဋ္ဌေး ဦးမြမောင်နဲ့ ဒေါ်အုန်းကြည်တို့ရဲ့ တစ်ဦးတည်းသောသမီး၊ ဒေါ်စန်းစန်းမြနဲ့ ခင်ပွန်း ဦးစောကြည်ဖေတို့ရဲ့ မွေးစားသမီးဖြစ်တဲ့ မမြစန္ဒာရဲ့ ခင်ပွန်းဦးသုဇော်ဟာ အလောင်းအစား ခုံမင်တယ်။ ဗိုလ်ချူပ်သာအေး သား အစရှိတဲ့ နအဖစစ်ဗိုလ်ချုပ် သားသမီးတွေ အပါအ၀င် ဦးသုဇော်တို့ လေးကောင်ဂျင် ကစားကြရာ ဦးသုဇော် အကြီးအကျယ် ရှုံးပြီး အကြွေးပါတင်သွားတယ်။ အဲ့ဒီအကြွေးတွေ ချေဖို့အတွက် ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်က ဦးသုဇော်ကို သူ့ယောက္ခမပိုင်တဲ့ ပတ္တမြားကြီးကို ယူပေးဖို့ စီမံညွှန်ကြားခဲ့ရာက ငါးလောင်းပြိုင် လူသတ်မှု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ယခုကဲ့သို့ တရားခံ မဖော်နိုင်သော၊ မဖော်နိုင်သည်မဟုတ် မဖော်ဝံ့ မဖော်ထုတ်ရဲသော အမှုပေါင်းများစွာပင် ရှိနေပါသေးသည်။
တရုတ်သံရုံးအနားမှာ ကိုနေမျိုးဇင်တို့အဖွဲ့တွေနဲ့ ရဲတွေ ထိပ်တိုက်တွေ့
ဒီည တရုတ်သံရုံးအနားမှာ ကိုနေမျိုးဇင်တို့အဖွဲ့တွေနဲ့ ရဲတွေ ထိပ်တိုက်တွေ့ကြတာ ဆန္ဒပြသူတွေ ထိခိုက်မှုရှိမရှိ မသိရပေမဲ့ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်တာတော့ တော်တော်အခြေအနေ ဆိုးတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်…
ပြည်ထောင်စုရိပ်သာလမ်းအား လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များက အင်အားသုံးပိတ်ဆို့
ယနေ့ရန်ကုန်လက်ပံတောင်းအရေး ဆန္ဒပြပွဲ အရေးပေါ်အခြေအနေ
ဆန္ဒဖော်ထုတ်သူများ တရုတ်သံရုံးရှေ့သို့ မသွားရောက်နိုင်စေရန်အတွက်
ပြည်ထောင်စုရိပ်သာလမ်းအား လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များက အင်အားသုံးပိတ်ဆို့ထားပါသည်။ လမ်းအထဲတွင် စွမ်းအားရှင်များကလည်းအသင့်စောင့်ဆိုင်းနေကြပါသည်။
ဆီးသီးဗန်းနှင့် ဦးခင်အောင်မြင့်၊ ဦးရဲထွဋ်နှင့် Facebook ပေါ်မှ အမေးအဖြေများ
Yesterday at 8:50pm · ·
(Written By: နေထွန်းနိုင်)
အစိုးရ ဝန်ကြီးဌာနများ၏ ခွင့်ပြုဘတ်ဂျက်အပေါ် လာဘ်စားမှုများအား “ပွဲဈေးတန်း ဆီးသီးဗန်းမှောက်ခြင်း” ဟု တင်စားပြောဆိုခဲ့သော အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်အောင်မြင့်၊ ဦးခင်အောင်မြင့်၏ ပြောကြားချက်ကို ပြန်လည်တုံ့ပြန်ခဲ့သော ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ်၊ ဦးရဲထွဋ်၏ ပြန်လည်တုံ့ပြန်ချက်အပေါ် အခြေခံပြီး ဦးရဲထွဋ် Facebook ပေါ်မှ အမေးအဖြေများမှာလည်း ပြည်သူလူထုအကြား ဂယက်ရိုက်ခဲ့သော ကိစ္စရပ်များ ဖြစ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်အတွင်း ထင်ရှားသော အဖြစ်အပျက် တစ်ခုအဖြစ် Weekly Eleven News ဂျာနယ်က ဖော်ပြလိုက်သည်။
စက်တင်ဘာ ၁၆ ရက်က ပြုလုပ်သည့် အမျိုးသားလွှတ်တော် အစည်းအဝေး၌ ဦးခင်အောင်မြင့်က အစိုးရဝန်ကြီးဌာနများ၏ ဘတ်ဂျက်ငွေ လာဘ်စားမှုများကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
“ပွဲဈေးတန်းမှာ ဆီးသီးဗန်း မှောက်ကျသလိုပဲ။ မှောက်လည်းကျရော ဟိုလူက တစ်ဆုပ်နှိုက်စား၊ ဒီလူက တစ်ဆုပ်နှိုက်စား ဆီးသီးက တစ်ဝက်လောက်ပဲ ကျန်တော့တယ်။ ဘတ်ဂျက်က အဲဒီလို ဖြစ်နေတယ်” ဟု ဦးခင်အောင်မြင့်က ဆိုသည်။
အဆိုပါ ပြောကြားချက်သည် အစိုးရသစ်လက်ထက် စီမံကိန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် ဝန်ကြီးဌာန အသီးသီးက တောင်းခံလာသည့် ဘတ်ဂျက်များကို လွှတ်တော်က ခွင့်ပြု ပေးနေသည့်တိုင် လာဘ်စားမှုများကြောင့် ဘတ်ဂျက်၏ တစ်ဝက်ကိုသာ အမှန်တကယ် အသုံးပြုနေရခြင်းအား ရည်ညွှန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဦးခင်အောင်မြင့်၏ ပြောကြားချက်ကို အစိုးရဝန်ကြီးဌာနများကိုယ်စား ဦးရဲထွဋ်က စက်တင်ဘာ ၁၉ ရက်၌ ဒီမိုကရေစီတူဒေး သတင်းစာမှ တုံ့ပြန်ပြောကြားခဲ့သည်။
“တိုင်းပြည်ရဲ့ ကြီးလေးတဲ့တာဝန်ကို ယူထားရတဲ့ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက အစိုးရဝန်ကြီးဌာနတွေရဲ့ အားနည်းချက်ကို ပြောတာ လက်ခံပါတယ်။ သို့သော် မိမိရဲ့တာဝန် လေးနက်မှုကြောင့် သူပြောတဲ့ စကားတွေဟာ ပိုပြီး တိတိကျကျဖြစ်ဖို့ ကောင်းတယ်။ ဘယ်ဝန်ကြီးဌာနလဲ၊ ဘာဖြစ်နေလဲ၊ တိကျစွာပြောရင်တော့ ပိုကောင်းပါတယ်” ဟု ဦးရဲထွဋ်က ဆိုခဲ့သည်။
ဦးရဲထွဋ်က ယင်းကဲ့သို့ တုံ့ပြန်ပြီးချိန်တွင် The Daily Eleven သတင်းစာ၏ သတင်းထောက်ချုပ် ကိုမာန်သူရှိန်က The Daily Eleven သတင်းစာတွင် “ဦးရဲထွဋ်တုံ့ပြန်၍ ဦးခင်အောင်မြင့်ကိုယ်စား ကျွန်တော်ပြောချင်သည်” ဆောင်းပါးကို ရေးသားခဲ့သည်။
ကိုမာန်သူရှိန်၏ ဆောင်းပါးတွင် ဦးခင်အောင်မြင့်၏ ဆိုလိုရင်း၊ ဦးရဲထွဋ် တုံ့ပြန်ချက်အပေါ် မေးခွန်းထုတ်မှုများကို ထည့်သွင်းခဲ့သည်။
၂ဝ၁၂ ခုနှစ်မှ ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်အတွင်း ကျန်းမာရေးနှင့် ပညာရေး ကဏ္ဍများအတွက် ချထားပေးသည့် ဘတ်ဂျက်ငွေမှာ ကျပ်ဘီလျံပေါင်း ၄၄ဝဝ နီးပါး ရှိခဲ့သော်လည်း အဆိုပါ ကဏ္ဍနှစ်ရပ်တွင် ပြည်သူလူထုအတွက် ပြန်အသုံးပြုမှု၌ အဆောက်အအုံများ အရည်အသွေးမမီ ဖြစ်နေခြင်း၊ တင်ပြငွေနှင့် အမှန်တကယ် အသုံးပြုစရိတ် ကွာဟမှုများ ရှိနေခြင်းတို့ကို ကိုမာန်သူရှိန်က ပြောဆိုခဲ့ပြီး ဦးခင်အောင်မြင့်ကလည်း ထိုအချက်များကို သက်သေနှင့်တစ်ကွ လွှတ်တော်တွင် ပြောခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ဟု ရေးသားခဲ့သည်။
ယခင်အစိုးရနှင့် ယခုအစိုးရလက်ထက် တင်ဒါခေါ်ယူမှု ကွာခြားပြီး ယခုအစိုးရ လက်ထက်တွင် ပိုမိုပွင့်လင်းမြင်သာကြောင်း ဦးရဲထွဋ်၏ ပြောစကားကို ကိုမာန်သူရှိန်က ထောက်ပြရာ၌ 7Day ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြခဲ့သော “ထူးမခြားနား လေလံပွဲများ ဆောင်းပါး” ကို သက်သေပြ၍ ရေးသားခဲ့သည်။
“တင်ဒါနဲ့ ပတ်သက်ရင် တင်ဒါမှာ တာဝန်ယူရတဲ့ အစိုးရအရာရှိနဲ့ အဖွဲ့အဆင့်ဆင့်မှာ လာဘ်ပေး၊ လာဘ်ယူမှု လုပ်နေတာ ထင်ရှားတယ်။ ဒါကို သိချင်ရင် သူတို့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ မူရင်းလစာကို စစ်လိုက်ရုံပဲ။ ဒီလို တိတ်တိတ်ပုန်း ကျိတ်လုပ်တဲ့ ကိစ္စမျိုးတွေကို အတိအကျ ပြောပါ။ တိတိကျကျပြောပါ ဆိုတာကတော့ သူခိုးလက်ခံလည်းပြ သူခိုးလည်းပြဆိုပြီး ခိုင်းသလို ဖြစ်နေပါတယ်” ဟု ကိုမာန်သူရှိန်က ရေးသားခဲ့သည်။
ထို့နောက် အစိုးရ ဝန်ကြီးဌာနများ အဂတိလိုက်စားမှုများ၊ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုများ ရှိနေခြင်းကို ပေါ်လွင်စေရန်အတွက် အစိုးရ တာဝန်ရှိသူများ ရရှိနေသည့် လစာနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုများကို တွက်ချက်ပြခဲ့သည်။
“နိုင်ငံတော်သမ္မတ လစာက တစ်လ ကျပ် ၁၅ သိန်းနဲ့ ၃၆ လ သိန်း ၅၄ဝ၊ အခု ပြင်ဆင်လိုက်တဲ့ တစ်လ သိန်း ၅ဝ နဲ့ ဩဂုတ်လကုန်ထိ ငါးလစာ သိန်း ၂၅ဝ။ သမ္မတ သက်တမ်းတစ်လျှောက် ၄၁ လစာအတွက် စုစုပေါင်း သိန်း ၇၉ဝ ရပါမယ်။ အစိုးရသစ်လက်ထက် ၄၁ လလုံးလုံး တောက်လျှောက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဖြစ်တဲ့သူက ကျပ် ၃၆၆ သိန်း ရပါမယ်။ ဒုဝန်ကြီးက ၂၆၂ သိန်းရပါမယ်။ ညွှန်ချုပ်အဆင့်က တစ်ဦးကို သုံးနှစ်ခွဲကျော်အတွင်းမှာ လစာကျပ်သိန်း ၈ဝ နီးပါးပဲ ရပါမယ်။ အခုအစိုးရသစ် သက်တမ်း ၄၁ လအတွင်းမှာ ဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့သူက ဘာမှမစားသောက်၊ မသုံးဘဲ ရသမျှ စုထားရင်တောင် ကျပ် ၃၆၆ သိန်းပဲ ရမယ်။ တိုက်ခန်းကျဉ်းကျဉ်း ဝယ်ဖို့တောင် နေရာကောင်းမှာဆို မရဘူး။ ဒုဝန်ကြီးလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပဲ။ ညွှန်ချုပ်အဆင့် တိုက်ခန်းတောင် မဝယ်နိုင်ဘူး” ဟု ကိုမာန်သူရှိန်က ရေးသားသည်။
သို့သော် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူလုပ်နိုင်သည့် စီးပွားရေးအရ ဆက်စပ်သည့်ဌာနများရှိ ညွှန်ချုပ်အဆင့် ဝန်ထမ်း အများအပြားမှာ တိုက်ခန်းများစွာ၊ မြေကွက်များနှင့် ကားများစွာ ဝယ်စီးနိုင်သည့် အခြေအနေတွင် ရှိနေသည်ဟု ဆက်လက်ထောက်ပြခဲ့သည်။
“ကျွန်တော်တို့ အယ်ဒီတာတွေထဲမှာ တစ်လ ကျပ်ငါးသိန်းကနေ ကျပ်ခုနစ်သိန်းကြား ရကြပါတယ်။ ဒီသုံးနှစ်ခွဲ ကာလအတွင်းမှာ အယ်ဒီတာတွေက တစ်ဦးလစာငွေ ကျပ်သိန်း ၂ဝဝ ကနေ အမြင့်ဆုံး ကျပ်သိန်း ၂၈ဝ အထိ ရှိပါတယ်။ ညွှန်ချုပ်တစ်ယောက် လစာထက်ပိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အယ်ဒီတာတွေဟာ အိမ်ငှားခ၊ စားစရိတ်၊ ဆေးကုစရိတ်၊ သွားစရိတ်၊ လာစရိတ်တွေနဲ့ အိမ်ပိုင်ဝယ်နိုင်ဖို့ကတော့ လုံးဝကို မဖြစ်နိုင်သေးတဲ့ အနေအထားပါ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ အယ်ဒီတာတွေထက် တရားဝင်လစာ နည်းပေမယ့် ညွှန်ချုပ်အဆင့် အရာရှိတွေရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို ကြည့်လိုက်ပါလား” ဟု ကိုမာန်သူရှိန်က ရေးသားခဲ့သည်။
ထိုဆောင်းပါး၌ပင် ဦးရဲထွဋ်အနေဖြင့် ဦးခင်အောင်မြင့်အား တိတိကျကျ ထောက်ပြရန် မေးခွန်းထုတ်ခြင်းထက် စံနမူနာပြ အနေဖြင့် ဦးရဲထွဋ်ကိုယ်တိုင် ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် လစာကို နှိုင်းယှဉ်ပြစေလိုကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ကိုမာန်သူရှိန်၏ ဆောင်းပါးအပေါ် တုံ့ပြန်မှုအား စက်တင်ဘာ ၂၂ ရက်တွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရှိ သတင်းထောက်များကို ဦးရဲထွဋ်က ပြောကြားခဲ့သည်။
“ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဥပဒေအရ ကျွန်တော့်ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုကို သိချင်ရင် ဥပဒေကြောင်းအရ တောင်းဆိုမှပဲ ရမယ်။ ဆိုပါတော့ ခင်ဗျားတို့ အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေး ကော်မရှင်ကို တိုင်ချင်တိုင်။ ဒါမှမဟုတ် ကျွန်တော် အဂတိလိုက်စားတယ် ထင်ရင် Eleven အနေနဲ့ ဖွင့်ချပြီးရေး။ အဲဒီအခါကျရင် ကျွန်တော် ဥပဒေဘက်ကနေ ရင်ဆိုင်ဖို့ အသင့်ပဲ” ဟု ဦးရဲထွဋ်က ဆိုသည်။
ထို့ပြင် “.... အခုအချိန်ထိ ဝန်ကြီးအိမ်တောင် ပြောင်းမနေသေးဘူး။ ဝန်ကြီးအိမ်လည်း ကျွန်တော် ပြောင်းနေမှာ မဟုတ်ဘူး။ ညွှန်ချုပ်တုန်းက ဆောက်ထားတဲ့အိမ်လေး ရှိတယ်။ အိမ်သေးသေးလေးတစ်လုံး ရှိတယ်။ အဲဒီကိုပဲ ကျွန်တော်ပြောင်းပြီးနေမှာ။ အဲဒါလည်း ကျွန်တော့်ပိုင်ဆိုင်မှု တစ်ခုပေါ့ဗျာ” ဟု ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
ဦးရဲထွဋ်က ၎င်း၏ ဖြေကြားမှုများကို Facebook ပေါ်တွင် ဆက်လက်ဖော်ပြခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း Facebook သုံးစွဲသူများကြား၌ သာမက အများပြည်သူကြား၌ပါ ဦးရဲထွဋ်၏ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး မေးခွန်းထုတ်မှုများ ဖြစ်လာခဲ့သည်။
မေးခွန်းထုတ်မှုများတွင် Aung Myint ဆိုသော အမည်ဖြင့် လူမှုကွန်ရက် Facebook သုံးစွဲသူ တစ်ဦးက ဦးရဲထွဋ်၏ ဇနီးသည် ကင်ဆာဖြစ်ချိန်တွင် ကုန်ကျခဲ့သောငွေ ကျပ်သိန်း ၂ဝဝ ကျော် အသုံးပြုခဲ့ရခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ပြောဆိုခဲ့ရာ ဦးရဲထွဋ်က “ကို Aung Myint ခင်ဗျားပြောသလိုပဲ။ ကျွန်တော့်ဇနီးကို ဆေးကုတာ ပြည်တွင်းရော၊ ပြည်ပမှာပါ ပေါင်းလိုက်ရင် သိန်းနှစ်ရာနီးပါး ကုန်ပါတယ်။ ဘယ်က ပိုက်ဆံရလဲဆိုတော့ ကျွန်တော့်မှာ ငွေမရှိတဲ့အတွက် အကျိုးအကြောင်း ဖော်ပြပြီး လျှောက်ထားတဲ့အတွက် ဆူဇူးကီး R+ တစ်စီး ဝယ်ခွင့်ရတယ်။ အဲဒီအချိန်က ကားဈေးတွေကောင်းတော့ အဲဒါကိုရောင်းပြီး ဆေးကုပါတယ်။ စက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှာ မှတ်တမ်းရှိပါတယ်။ သွားကြည့်ပါ။ အလဲဗင်းကို မေးကြည့်။ အဲဒီအချိန်က သူတို့ဂျာနယ်မှာ ကျွန်တော်ပင်တိုင် ရေးနေတဲ့အတွက် သူတို့တောင် ကူညီဖူးပါတယ်။ ဘာမှလျှို့ဝှက်စရာအကြောင်း မရှိပါဘူး...” ဟု ပြန်ဖြေခဲ့သည်။
ထိုအချိန်မှာပင် နရဲစွမ်အမည်ဖြင့် Facebook သုံးစွဲသူ တစ်ဦးကလည်း ဦးရဲထွဋ်တွင် တိုက်ခန်းသုံးခန်း ပိုင်ဆိုင်ထားကြောင်း၊ ထိုတိုက်ခန်းများမှာ အမှတ် ၁၆၇၊ ခြောက်လွှာ၊ လမ်း ၅ဝ ရှိ ကွန်ဒိုခန်းကို သိန်း ၁၆ဝဝ ဖြင့် ဝယ်ယူထားခြင်း၊ ၄၈ လမ်းတွင် ပေ ၄ဝ x ၆ဝ တစ်ခန်းနှင့်ပေ ၄ဝ ပတ်လည် တစ်ခန်းကို ၁ စတုရန်းပေလျှင် ငွေကျပ် ၁၅ဝဝဝဝ၊ ကြိုတင်အရစ်ကျ စနစ်ဖြင့် ဝယ်ယူထားခြင်းတို့ဖြစ်ကြောင်း Facebook တွင် ထုတ်ဖော်ရေးသားခဲ့သည်။ ထို့အတူ (MJN) အဖွဲ့ဝင်သတင်းထောက် ကိုဖြိုးဝေဝင်း (Renai Ssance Facebook Account ပိုင်ရှင်) က ဦးရဲထွဋ် ပိုင်ဆိုင်ထားသည်ဟု ယူဆရသော တိုက်ခန်းနှစ်ခန်း ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး လူကိုယ်တိုင်အားဖြင့် လည်းကောင်း၊ လူမှုကွန်ရက် Facebook တွင် ပြန်လှန်မေးခွန်းထုတ်၍လည်း မေးမြန်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားဟောင်း ဦးဇော်ဝင်းနှင့် အခြားသူများကလည်း နရဲစွမ်၏ ဖော်ပြချက်ကို ဦးရဲထွဋ် Facebook တွင် ပြန်လည်ရေးသားပြီး မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ကြသည်။
ထိုနောက်ပိုင်းတွင် ဦးရဲထွဋ် Facebook ၌ သတင်းထောက် ကိုဖြိုးဝေဝင်းနှင့် ဦးရဲထွဋ်၊ အခြားသူများနှင့် ဦးရဲထွဋ်တို့အကြား အပြန်အလှန် အမေးအဖြေများ ဆက်ဖြစ်ခဲ့ပြီး သတင်းထောက် ကိုဖြိုးဝေဝင်းက မေးခွန်းများကို Facebook ပရိသတ်တစ်ဦး၊ သတင်းထောက်တစ်ဦး အနေဖြင့် ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာစား ဆင်းရဲသော ဝန်ကြီးတစ်ဦးက တိုက်ခန်းများ ဝယ်ယူထားသဖြင့် မေးမြန်းခြင်းဟု ပြောခဲ့သည်။
ပိုင်ဆိုင်မှုအတွက် မေးခွန်းများနှင့် ပတ်သက်ပြီး Facebook ပေါ်၌ သတင်းထောက် ကိုဖြိုးဝေဝင်းအား နောက်ဆုံးဖြေကြားခဲ့သော ဦးရဲထွဋ်၏ ဖြေကြားချက်တွင် “... သတင်းထောက်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ခင်ဗျားသိချင်တယ်ဆိုရင် ခင်ဗျား စဉ်းစားနိုင်ဖို့ တစ်ခုတော့ ပြောပါ့မယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ဝ နှစ်လောက်က ခင်ဗျား မြို့ကြီးတစ်မြို့မှာ မြေတစ်ကွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတယ် ဆိုကြပါစို့။ အခု ပြန်ရောင်းရင် ဘယ်လောက်ရှိမယ်ဆိုတာ ခန့်မှန်းကြည့်ပေါ့ဗျာ။ လစာ တစ်ခုတည်းနဲ့ ခင်ဗျားတွက်နေရင် မလုံလောက်ပါဘူး။ ကျွန်တော့်ကို စာမျက်နှာပေါ်က တရားဝင် ရေးလာရင် ရင်ဆိုင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ အချက်များ ဖြစ်တဲ့အတွက် အွန်လိုင်းမှာ အသေးစိတ် ကြိုမပြောထားတာကိုတော့ နားလည်ပေးပါ။ နောက်ထပ် ကျွန်တော် ဆွေးနွေးရန် မရှိတော့ပါဘူး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်” ဟု ပြောကြားခဲ့ပြီး မေးခွန်းထုတ်မှုများ၌ ပါဝင်သော တိုက်ခန်းနှစ်ခန်း ပိုင်ဆိုင်ထားသည့် ကိစ္စကိုမူ ယတိပြတ် ငြင်းချက်ထုတ်ခဲ့ခြင်း မရှိပေ။
ထိုသို့ ပြောကြားပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ဇနီးသည်ကို ဆေးကုရာ၌ ငွေမရှိ၍ ဆူဇူးကီး R+ တစ်စီး လျှောက်ထားပြီး ထိုကားကို ပြန်လည်ရောင်းချခြင်းမှ ရသောငွေဖြင့် အသုံးပြုခဲ့ကြောင်း၊ လွတ်တော်တွင် ပြောကြားစဉ်က အိမ်သေးသေးလေးတစ်လုံး ပိုင်ဆိုင်ထားကြောင်း ပြောဆိုမှုများ ရှိခဲ့သော်လည်း ဦးရဲထွဋ်တွင် တိုက်ခန်းနှစ်ခန်း ပိုင်ဆိုင်ထားကြောင်း အခိုင်အမာ ပြောဆိုမှုများ ရှိလာသည်။
သို့သော် ဦးရဲထွဋ်သည် အခြားသော ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၎င်း၏ ပိုင်ဆိုင်မှုမှာ အဆမတန် နည်းပါးသူ တစ်ဦး ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ ပိုင်ဆိုင်မှု အလွန်နည်းပါးသည့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး တစ်ဦးပင်လျှင် ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး Facebook နှင့် ပြည်သူများအကြားတွင် ထောက်ပြမှုများ၊ အမေးအဖြေများနှင့် ငြင်းခုံမှုများစွာ ဖြစ်ခဲ့သည်။
ထိုအချက်ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဦးရဲထွဋ်ထက် အဆပေါင်းရာချီ ချမ်းသာနေသော အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ယခုထက် ပိုမိုပြင်းထန်သော ဝေဖန်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် အခြေအနေတွင် ရှိနေသည်။
သေချာသည့် အချက်တစ်ခု အနေဖြင့် ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်အတွင်း ပေါ်ပေါက်ခဲ့သော ဆီးသီးဗန်းကိစ္စ နည်းတူ သမ္မတ၊ ဒုတိယသမ္မတများ၊ အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ၊ တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများ၊ ၎င်းတို့၏ သားသမီး၊ မိသားစုဝင်များ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုများနှင့် ပတ်သက်သော ထောက်ပြမှုများမှာ ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်အတွင်း ပြည်သူများအကြားတွင် သာမက မီဒီယာများတွင်ပါ ဝေဖန်ထောက်ပြ မေးခွန်းထုတ်မှုများ ပိုမိုပြင်းထန်စွာ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။
(ပုံစာ - နရဲစွမ်၏ ရေးသားမှုနှင့် ဦးရဲထွဋ်၏ အပြန်အလှန် ပြောဆိုမှုများ)
ရွာသားတွေက ယနေ့ မှာပြန်လည်ဖျက်ဆီးရင်းဆန္ဒထုတ်ဖော်
Author / Photo ခေမဏီ
December 28, 2014 at 4:32am
ကတညုတက ကျေးဇူးကို အဖန်ဖန် အောက်မေ့တာပေါ့လေ။ အဲဒီမှာတင် မပြီးဘူး၊ ကတဝေဒီက ဆပ်တာပေါ့နော်။ သမ္မဇဉ်ပါပဲခင်ဗျာ။ ကျွန်တော့်ရှေ့က ယူသွားတဲ့ ကျွန်တော့်ဆရာတွေလည်း ဒီလိုပဲ ပြောတာပါပဲ။ သူတို့ ကျေးဇူးတွေ ကျွန်တော်တို့က တသက်လုံး ဆပ်လို့ မကုန်ပါဘူး။
သို့သော် ဒီမှာတော့ အထူးသဖြင့် ပြောချင်တာကတော့... အတိုလေးပေါ့လေ၊ ထိလည်း ထိအောင်၊ စူးလည်း စူးရှအောင်... ကျွန်တော်ကတော့ Just surfing on that very easy matter (လွယ်လွယ်ကလေး လှိုင်းစီးရုံပါ) ဒီလောက်ပါပဲ။
တကယ်တော်တာကတော့ ပန်းချီဦးစိုးမိုးပါခင်ဗျာ။ တကယ်ကောင်းတာက ဇာတ်ညွှန်းဆရာပါခင်ဗျာ။ နောက် ဘေးက ပံ့ပိုးကြတဲ့ (ကျွန်တော်) ကြိုက်သလောက်ပေါ့။ ကျွန်တော် ဒီနေ့ တီးပြီးသားဟာကို မနက်ဖြန် ပြန်ဖျက်ရင် ဖျက်ပါတယ်။ ဒါ အခု ၀န်ခံတာပါခင်ဗျာ။
ဒီအတွက် ကျွန်တော် သိတာကတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပရိုဂျူဆာက စစ်ကားနဲ့ ဆရာကြီးတွေ တစ်အုပ်ကြီး လာတယ်ပေါ့လေ၊ အစည်းအဝေးလုပ်ရင်...။ အဲဒီဆရာကြီးတွေ၊ စစ်ဘက်က တာဝန်ရှိတဲ့ ဆရာကြီးတွေ မဟုတ်ဘဲနဲ့ ကျွန်တော့်ဆီ တစ်ခါလောက်ပဲ အသားအင်မတန်ဖြူတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်က ပန်းချီစိုးမိုးတို့နဲ့ ပါလာပါတယ်။
ပန်းချီစိုးမိုးက ကျွန်တော့်ကျေးဇူးရှင်ပါ၊ ဒီအချိန်ကစပြီး အစ်ကိုလို့ခေါ်မှ ဖြစ်ပါတော့မယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူက ကျွန်တော့်ကို ဒုတိယ (အကြိမ်) ကြိုးစားပေးတာပါ။
ကျွန်တော်က လွန်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကားပေါ့လေ၊ ဒါလေးတော့ ပြောခွင့်ပြုပါ၊ လေရှည်တယ်ထင်ရင်လည်း ခွင့်လွှတ်ပေးပါ။ ကိုကြည်စိုးထွန်းက ၁၉၉၉ လောက်မှာ ကျွန်တော့်ကို... မောင်လျှမ်းထက်တို့ပါတဲ့ ကားလေးကို ကျွန်တော်နဲ့ သီချင်းသွင်းပါတယ်။ သီချင်းသွင်းလည်းပြီးရော ကျွန်တော်က အင်္ဂလန်သွားပါတယ်။
ကျွန်တော်က စာဂျပိုး Book Worm ဆိုတော့ ဒိုင်ယာနာရှိတဲ့ ဒိုင်ယာနာမြို့ (ဝေလပြည်) ကို သွားပြီး Library စာကြည့်တိုက်ကြီးမှာ ကျွန်တော် ပျော်ပျော်ကြီး သုံးပတ်လောက် သွားပြီး နေနေပါတယ်။ ဝေလစာကြည့်တိုက်ဆိုတာ (ယူကေနိုင်ငံရဲ့) အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုပဲလေ။
အဲဒါကို ကျွန်တော် ပျော်နေတာနဲ့ ကိုကြည်စိုးထွန်းက လှမ်းပြီးဖုန်းဆက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အိမ်ကလည်း ပြောပါတယ်။ လာပါ၊ ရုပ်ရှင် (ကားအတွက် အသံ) သွင်းရအောင်၊ ကျိန်းသေ ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ ၀ါစဉ်အရလည်း အသက်အရလည်း... အစ်ကိုကြီး ဦးကြီးမြင့် ပြောခဲ့သလို ``မင်း... ထိုင်သာ စောင့်နေပါ၊ မင်းအလှည့်ကျရင် ရောက်လာမှာပေါ့ကွာ`` ဆိုတဲ့အခါ ``အစ်ကိုရယ် ဒါက ထိုင်စောင့်တာတော့ မရပါဘူး၊ ကံအလှည့်ဖြစ်ရင် ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျန်တဲ့အလှည့်ကတော့ မရပါဘူး`` လို့...၊ ပစ္စုပ္ပန်မှာ ဘယ်လောက်လုပ်လုပ်ပေါ့လေ၊ မယ်နုအုတ်ကျောင်း ဆရာတော်ဘုရား ပြောသလိုပါပဲ။
အခုဘယ်လောက်လုပ်လုပ် ငွေဖလားထဲမှာ...၊ သူ့မြေးလေးလည်း ပါတယ်ပေါ့။ ကိုယ်တော်ဘုရားနဲ့ ကိုယ်တော်ဘုရားရဲ့ မိဖုရားကြီးနဲ့ အခုလုပ်နေတဲ့ ကုသိုလ်တွေဟာ ဘယ်လိုများ ရှိမလဲဆိုတဲ့ အခါကျတော့ အဲဒီ မယ်နုအုတ်ကျောင်းဆရာတော်... (အဲဒီဆရာတော်က) သူ့အမေကို အိမ်ရှေ့ (ကျောင်းရှေ့) ကနေပြီးတော့ (အသုဘ) ချသွားတဲ့အခါမှာတောင် ဒကာမကြီးရေ... သွားနှင့်၊ ကိုယ်တော်တော့ နောက်မှ လိုက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ စာကြည့်မပျက်ဘူးပေါ့၊ အဲဒီကိုယ်တော်ပေါ့။
နန်းမတော်မယ်နုကတော့ အင်မတန် ထင်ရှားပါတယ်။ ဒီခေတ်မှာလည်း နန်းမတော်မယ်နုနဲ့ အင်မတန်နီးတဲ့ အန်တီကြီးတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒီလို အင်မတန်ဝင်ပြီးတော့ တွင်ကျယ်ပြီးတော့ စွာကျယ်စွာကျယ် အန်တီကြီးတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒါ စွာကျယ်စွာကျယ် အန်တီကြီးကို ပြောတယ်။
တပည့်တော် အခုသွားရတော့မယ်၊ တပည့်တော်ကို လည်ပင်းကို နင်းတော့မယ်၊ ဘာနဲ့နင်းမလဲ မသိတော့ဘူးဆိုတော့ (ဟေး....ပရိသတ်များအော်သံ) အဲဒီလို Applauds (အားပေးလက်ခုပ်တီး) လာတဲ့အခါမှာ Just for Minute , Just for Second (မိနစ်ပိုင်း၊ စက္ကန့်ပိုင်းလောက်) ခဏလေး နားပေးရမယ်ဆိုတာ လူမသိဘဲ ကျွန်တော်သိထားတဲ့ ကျွန်တော့်ဆရာတွေက သင်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော် ဘယ်လောက်တော်တော် မဖြစ်ပါဘူးလို့...။
ခုနပြောတဲ့ ရေဖလားထဲကို ဘုရင်ကြီးနဲ့ ဘုရင်မရှေ့မှာ ရေတွေထည့်လိုက်တယ်။ ဟောဒီမှာ ကြည့်ကြ၊ ဘုရင်ဆိုတဲ့လူ၊ ဘုရင်မဆိုတဲ့လူ ဘယ်တုန်းက ကံတွေ သံသရာမှာ ပါလာတဲ့အတွက် ဘုရင်နဲ့ဘုရင်မ ဖြစ်တယ်ဆိုတာက နင်တို့တစ်ခါတည်း သိကြ။ နို့မို့ဆိုရင် ဘ၀င်မြင့်နေမှာစိုးလို့၊ သူတို့က ဘယ်တော့မှ ဒီနေရာက ဖယ်တာမဟုတ်ဘူး။
သူ့မြေးလေးက မျောက်ရှုံးအောင် ဆော့တယ်။ မြေးမျောက်ရှုံးအောင်ဆော့တာ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ ရှိပါတယ်။ အစဉ်အလာရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ မြေးက အဖွားရဲ့အသည်းဖြစ်နေတယ်၊ အဘိုးရဲ့အသည်း ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီအဘိုးနဲ့အဘွားက ငကြောင်ကြီးဆို သွားပြီပဲ၊ ငပေါမကြီးဆို သွားပြီပဲ။ ဒီမှာတော့ ဘုရင်နဲ့ ဘုရင်မပေါ့လေ။ အစဉ်အလာပေါ့။ ဗမာမှာ ဒါပဲ ဂုဏ်လုပ်နေရတာ။
အဲဒီမျောက်ကလေးက ဒီကလေးက ဘယ်သူလဲကွ၊ အသွန်အသင် အဆုံးအမ မရှိဘူးလားကွ ဆိုပြီးတော့ အဲဒီလိုပြန်ပြီး ဟောက်ရဲတာ ပြောရဲတာ ချက်ချင်း Comment (မှတ်ချက်) ပေးရဲတာ ဒီအုတ်ကျောင်းဆရာတော်ပဲ ရှိပါတယ်။
သူက (ဆရာတော်က) ကြည့်ကြည့်ဆိုပြီး ရေကို ပြတယ်၊ အဲဒီလောက်ပဲ မင်းတို့ ရမယ်တဲ့၊ မင်းတို့ ခု ဘယ်လောက်လှူလှူ အဲဒီလောက်ပဲ ရမယ်ဆိုပြီး ပြတဲ့အခါကျတော့ အထဲမှာ ရေမရှိပါဘူး။ ဒါကို နားလည်ရမှာက ဥာဏ်သိ သိရမယ်။ ဘယ်လိုဥာဏ်သိ သိရမလဲ ရေတော့ မရှိဘူး၊ အထဲမှာ စိုနေတယ်။ အစိုဓာတ်ကလေး ကျန်ခဲ့တယ်။ ဒါပဲရမယ်။ ပစ္စုပ္ပန်မှာ ကျွန်တော် ဘယ်လောက် ကြိုးစားကြိုးစား ကျွန်တော် အဲဒီလောက်ပဲ ရနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်မှာ သီးခြားဂုဏ်ရည် ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်ဟာ လက်တီးမှာ (ကျွန်တော်တို့ ဂီတနဲ့ လက်တီးလို့ ခေါ်ပါတယ်) Virtuoso ပါ၊ ဒါဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့ ရပ်တည်တဲ့ ကိစ္စပါ။ ဒါဟာ ကျွန်တော်ရဲ့ ဘယ်မှာမှ မျက်နှာမငယ်တဲ့ ကိစ္စပါ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီလောက်နဲ့ မရပါဘူး။
ဒီရုပ်ရှင်နောက်ခံ တေးဂီတဆိုတဲ့ဟာက ဒီလိုတစ်ယောက်တည်း တီးလို့ မရပါဘူး။ အားလုံးကောင်းလို့ပါ။ ရုပ်ရှင်နောက်ခံတေးဂီတဆိုတဲ့ဟာက နိုင်ငံတော်ဟောင်းဖြစ်ဖြစ်၊ အသစ်ဖြစ်ဖြစ်၊ မဟောင်းတဟောင်း၊ မသစ်တသစ်ဖြစ်ဖြစ် တည်သလိုပဲ... အားလုံးကောင်းမှ ရတာပါခင်ဗျာ။
အဲဒီအတွက် ကျွန်တော့် သံသရာက ပါလာတဲ့အတွက် ကျွန်တော့်ကို ၁၉၉၉ က အကယ်ဒမီရဖို့ ကြိုးစားပေးခဲ့တဲ့ ကိုကြည်စိုးထွန်းလည်း သူ့စေတနာ အကောင်အထည် မဖော်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒုတိယ ခုနက ကျွန်တော့်ကို လာပြီးတော့ နှုတ်ဆက်တဲ့ လူကောင်သေးသေးလေးပေါ့လေ၊ လူကောင်သေးသေးလေးက ဘယ်လိုမှ မကြီးနိုင်ဘူး။ သူ့မှာ ပညာကြီးပါတယ်။ ပဋိဘာနဥာဏ်ကြီးတယ်။ လူက မကြီးဘူး၊ ပညာက ကြီးတယ်။ သူက ဘာမှ ထပ်ကြီးလို့ မရတော့ အင်္ကျီအပွ အမြဲတမ်းဝတ်တယ်။ နောက်ပြီးတော့ သူ့ကိုယ်သူ မကြီးကြီးအောင် နှုတ်ခမ်းမွေး တပ်ရတယ်။ အဲဒီ ခင်မောင်ကြီး... သူ အကယ်ဒမီရပြီး နောက်နေ့မနက်ကို သူ့အိမ်ကိုသွားပြီး အောက်ကနေ ကြိုးဆွဲတာ ကျွန်တော်ပါခင်ဗျာ။
ကျွန်တော်တို့မှာ အဘိဇ္ဈာ၊ မစ္ဆရိယ မရှိပါဘူး။ ကျွန်တော်ပြောချင်တာက အဲဒီ သူ ရတဲ့ ကားဟာ ကျွန်တော့်ကို အရင်အပ်တာပါ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်မှာလည်း အားလုံးဟာ အပြစ်ကလေးတွေ ရှိနေတဲ့အတွက် Filthy (ညစ်ကျယ်)၊ ကျွန်တော့်ကိုကြည့်ပါ။
ဂီတမှူးတွေထဲမှာ ကျွန်တော့်ရုပ်ရည်နဲ့ ကျွန်တော့်ပုံမျိုး မရှိပါဘူး။ ကျွန်တော့်နောက်မှာ လည်း ကျွန်တော့်နောက်က တီးနေတဲ့ ပထမပေးခဲ့တဲ့ ကလေးတွေကလည်း အသံကျယ်နေပါတယ်။ မောင်လှအေး၊ ဗိုလ်တာထွန်းညွန့် ရှိတယ်။ ကျွန်တော့်ဥာဏ်နဲ့ Velocity (အလျင်) နှုန်းကို မမီသေးပါဘူး။
သို့သော် ကျွန်တော့်သမီးကြီးအသက်က ၄၈ နှစ်ပါ၊ နောက်နှစ်နှစ်ဆို ၅၀ ပြည့်ပါပြီ။ ကျွန်တော်က ၇၀ ပါ။ နွေပေါက်တာနဲ့ ၇၀ ကို နင်းပါပြီ။ ကျွန်တော့်ကို ဦးအောင်မြင့်မြတ်က ပြောတယ်၊ တွဲမယ့်ကလေး ခေါ်လာပါတဲ့။ ဘာမှမလိုပါဘူးခင်ဗျ၊ အေးဆေးပါ၊ ပါးပါးလေး... (ခြေထောက်တစ်ဖက်တည်းဖြင့် စင်ပေါ်တွင် စက္ကန့်ပိုင်း ရပ်ပြ)။ ကျွန်တော့်အမူအရာတွေ မကျစ်လစ်ဘူးဆိုရင် ခွင့်လွှတ်ပါ။
ကျွန်တော် ပြောချင်တာက ကျွန်တော်ဟာ တော်တာကတော့ တော်နေတာပဲ၊ ကျွန်တော် ၂၀၀၅ မှာ ကိုပွား (ဒါရိုက်တာမီးပွား) ရဲ့ ``မင်္ဂလာပါ`` ကို စ တီးပါတယ်။ အဲဒီ ၂၀၀၅ နဲ့ ၂၀၁၃ ကြားမှာ ဘာမှ မတီးပါဘူး။ တခြားဟာပဲ တီးပါတယ်၊ ဘာမှ မတီးပါဘူး။ စန္ဒရား မတီးပါဘူး၊ ရုပ်ရှင် မတီးပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ပြန်တီးတဲ့ အခါမှာ ဒီလို (အခု အကယ်ဒမီဆု ရသလို) ထွက်ပါတယ်။
ကျွန်တော် ပြောပါတယ်၊ ကျွန်တော့်ကြောင့် မဟုတ်ပါဘူး။ Just surfing on that easy matter. အဆင်ပြေအောင် လုပ်ထားတာက ကျွန်တော့်အစ်ကို၊ ကျွန်တော့်ကို ဒီပညာ သင်ထားပေးတာ မဟုတ်ပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ကို ကောင်းကောင်းလေး ပညာပေးနိုင်တဲ့ ပန်းချီစိုးမိုး။ သူကောင်းလို့၊ သူ့ဇာတ်ကား အခင်းအကျင်း၊ သူ့အရုပ် Rhythm ရီသမ်တွေ အရမ်းကောင်းတဲ့အတွက် အခင်းအကျင်းတွေ ကောင်းတဲ့အတွက် ကျွန်တော်က လှိုင်းစီးသလို အိပဲ့အိပဲ့နဲ့ လိုက်ရုံပါပဲ။ သိပ်ဘာမှ ခက်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော့်ကျေးဇူးရှင်အစစ်တွေက အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ပြီးတော့ ကျွန်တော် ငွေကို ရေလို သုံးခဲ့လို့...၊ ရေလိုသုံးတဲ့အလား မတရား ဖြုန်းခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအတွက်လည်း တောင်းပန်ပါတယ်။ ဘယ်သူ့ကိုလဲ၊ ပိုက်ဆံတွေ... ပိုက်ဆံတွေ ဘယ်ကရမှန်း မသိဘဲနဲ့ ပိုက်ဆံတွေ သိမ်းဖို့နေရာ မရှိတဲ့လူ၊ ကျွန်တော်တို့က ပိုက်ဆံကို ရှာလို့ မရတဲ့လူ၊ သူတို့က သိမ်းဖို့နေရာ ခက်နေတဲ့လူ၊ ပိုက်ဆံထားဖို့နေရာတွေ လိုက်သိမ်းမှ ရမယ့်လူ၊ အဲဒီလူက ဘယ်သူလဲဆိုတော့ အဲဒီ...
(အဲဒီမှာ ဟာသသရုပ်ဆောင် ဇော်ဇော်အောင်က ရေသန့်ပုလင်းကို စန္ဒရားတင်ဝင်းလှိုင်ကို ကမ်းပြီး ကန်တော့ပါတယ်။ စန္ဒရား တင်ဝင်းလှိုင်ကလည်း ကရမလို ထိုင်ရမလိုနဲ့ ကွတကွတ ဖြစ်ပါတယ်။ ဇော်ဇော်အောင်က ပြောနေတာ ကြာလို့ ရေသောက်ဦးဆိုပြီး သရော်တာလား၊ ထိုင်ကန်တော့တော့ ပြောတာကိုပဲ သဘောကျသလား ပရိသတ်အနေနဲ့ ခန့်မှန်းရ ခက်ပါတယ်။
အစီအစဉ်ရဲ့ အခမ်းအနားမှူး မတင်မိုးလွင်က ရုပ်ရှင်လောကသားတွေ ပထမဆုံး ဦးစီး ကျင်းပတာမို့ ပျော်ကြလို့ပါ၊ ရှေ့တန်းက ထိုင်နေတဲ့ ဧည့်သည်တော်တွေ နားလည် ခွင့်လွှတ်ပေးပါလို့ ၀င်ပြောပါတယ်။ အကယ်ဒမီပွဲတက်တဲ့ ဧည့်သည်တော်တွေတော့ ဒုက္ခနဲ့လှလှ တွေ့တာပါပဲ)။
(စန္ဒရားတင်ဝင်းလှိုင်က စကားဆက်ပါတယ်) ကျွန်တော်တို့ အမူအယာများ မကျစ်လစ်တာရှိရင် ခွင့်လွှတ်ပေးပါခင်ဗျာ။ ကျွန်တော် ရှင်ပေါလုကျောင်းသား ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် မဟာဝိဇ္ဇာ (ဂုဏ်ထူး) ဖြစ်ပါတယ်။
(အဲဒီမှာ အခမ်းအနားမှူး ရန်အောင်က တစ်ခါ အစ်ကိုကြီးကို ဆုဆက်လက်ချီးမြှင့်ဖို့ ရှိပါတယ်။ ဆုချီးမြှင့်ဖို့ ဥက္ကဋ္ဌ လူမင်းကို ခေါ်ပြန်ပါတယ်)။ (စန္ဒရားတင်ဝင်းလှိုင်ဟာ စကားတန်းလန်းနဲ့ အပြီးမသတ်နိုင်ဘဲ စင်ပေါ်ကနေ ဆင်းသွားရပါတယ်။ သူ့ဆီကနေ စကားတွေ ကြားချင်ပါသေးတယ်။)
ဒီဇင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၄ ည။
ဂမ္ဘီရကြိုင်ကြိုင်နှင့် ငါးလောင်းပြိုင် လူသတ်မှု (စ...
တရုတ်သံရုံးအနားမှာ ကိုနေမျိုးဇင်တို့အဖွဲ့တွေနဲ့ ရဲ...
ပြည်ထောင်စုရိပ်သာလမ်းအား လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များက အင...
ဆီးသီးဗန်းနှင့် ဦးခင်အောင်မြင့်၊ ဦးရဲထွဋ်နှင့် F...